ဘင်္ဂါလီမူဆလင်လွှတ်တော်အမတ် ဦးရွှေမောင်နှင့် ရခိုင်ပညာတတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို ပြောဆိုချေပမှု
by Zwe Thit Rammarmray on Tuesday, 30 October 2012 at 07:16 ·
နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်လွှတ်တော်အမတ် ဦးရွှေမောင်နှင့် ရခိုင်ပညာတတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ မီဒီယာများရှေ့၊ တူရကီသံအမတ်ကြီးရှေ့၊ မြန်မာအစိုးရခေါင်းဆောင်များရှေ့တွင် အပြန်အလှန်ပြောဆိုဖြစ်ခဲ့သော စကားများထဲမှ တစ်ခုသော ပြောဆိုချေပမှု
ဘင်္ဂါလီမူဆလင်လွှတ်တော်အမတ် ဦးရွှေမောင်။ ။အစပိုင်းတုန်းက အမေရိကတိုက်ဆိုတာ ရက်အင်ဒီးယန်းတွေပဲရှိနေခဲ့တာ။ နောက်ပိုင်းကျမှ အင်္ဂလိပ်တွေ အမေရိကတိုက်ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲ။ ဘယ်သူတွေက အင်္ဂလိပ်တွေကို ကျူးကျော်သူတွေလို့ ပြောကြလဲ။ အခုလည်း ဒီအတိုင်းပေါ့။ ရခိုင်ပြည်ရဲ့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနယ်မှာ အရင်က ရခိုင်တွေရှိနေခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် အခု ကျုပ်တို့ မူဆလင်တွေရှိနေပြီ။ ကဲ- အဲဒီတော့ အဲဒီမြို့နယ်တွေကို အခုဘယ်သူပိုင်သင့်ပြီလဲ။ ခင်ဗျားတို့တွေစဉ်းစားတော့။
ရခိုင်ပညာတတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး။ ။အမေရိကန်အခြေအနေနဲ့ အခုရခိုင်ပြည်အခြေအနေနဲ့ လုံးဝမတူပါဘူး။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အဲဒီခေတ်အခါက ရှိနေခဲ့တဲ့ ရက်အင်ဒီးယန်းတွေဟာ ခိုင်မာတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ခိုင်မာတဲ့ ဘာသာတရားမရှိခဲ့ပါဘူး။ ခိုင်မာတဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမရှိခဲ့ပါဘူး။ လုံလောက်တဲ့အသိဥာဏ်ပညာဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ အင်္ဂလိပ်တွေ အမေရိကန်နိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်လိုက်တာဟာ သူတို့ ရက်အင်ဒီးယန်းလူရိုင်းတွေကို လူယဉ်ကျေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက် သူတို့တွေရဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ အခုရခိုင်ပြည်မှာက ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အုပ်ချုပ်မှုတွေ၊ အုပ်ချုပ်သူတွေ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေတယ်။ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှ ရခိုင်ပြည်ထဲသို့ ခိုးဝင်လာသူတွေဖြစ်ကြောင်း ကျွန်မတို့မှာ အထောက်အထား အပြည့်အစုံ ရှိပါတယ်။ သူတို့တွေကို ကြည့်လိုက်ရင်လည်း အလိမ်အညာတွေဗရပွနဲ့ ကမ္ဘာကို ပရိယာယ်ကြွယ်ကြွယ်နဲ့ ငိုပြကြတယ်။ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းစွာ ဒေသခံတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတာ ငြင်းမရနိုင်တဲ့အချက်ပါ။ အဲဒီလိုအန္တရာယ်တွေ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလာကြတဲ့အခါ ဒေသခံရခိုင်တွေကလည်း အသက်ဘေးစိုးရိမ်ကြတဲ့အတွက် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနယ်တွေက ထွက်ပြေးကြတယ်။ အဲဒီလို သူတို့တွေကို ကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားအောင် အကွက်ချပြီးလုပ်ကြတာကို။ အဲဒီတော့ ဘင်္ဂါလီတွေကို ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောနယ်တွေကို ပေးဖို့ ဆိုတာကတော့ လုံးဝကို မဖြစ်နိုင်တဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲ။ ကျွန်မပြောချင်တာ ဒါပါပဲ။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 9:37 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အမျိုးဘာသာ သာသနာမကွယ်ပျောက်စေဖို့ အစွန်းရောက်သင့်ရင်ရောက်ရမယ်
ဗုဒ္ဓဘာသာ ၉၄% ရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာ
မွတ်စလင်နိုင်ငံဘယ်လိုကြောင့် ဖြစ်သွားနိုင်မှာလဲ ဆိုလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာရာနှုန်းပြည့်ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်တွေ ဓားမိုးသာသနာပြုခဲ့တဲ့ ဘာသာခြားတွေကြောင့် သာသနာလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတဲ့နိုင်ငံတွေ ရှိခဲ့တယ် ရှိနေတယ်ဆိုတာ မသိတာလား မသိဟန်ဆောင်တာလားလို့ မေးချင်ပါတယ်။ စိတ်ထဲရှိတာကို ပြောတော့မယ်ဆိုရင် မျက်တောင်မွှေးတဆုံးပဲ ကြည့်မပြောဘဲ သမိုင်းကြောင်းကိုသေချာလေ့လာပြီးမှ ရေးတာပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။သို့မဟုတ်ပါက ကျူးကျော်သူဘင်္ဂါလီတွေဘက်ကနေ အားပေးရာရောက်ပြီး ကိုယ့်တပ်ကိုယ်ပြန်နင်းရာကျပါတယ်။
ဘင်္ဂါလီတွေဘက်ကနေ ပြည်တွင်းနေ၊ ပြည်ပနေ ဘာသာတူတွေကနေ တစ်ကမ္ဘာလုံး အားလုံးတစ်သံတည်းထွက်နေကြချိန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာဆိုသူတွေထဲကနေ ခုလို သူတော်ကောင်းလိုလို အရိယာဖြစ်နေသူလိုလို လုပ်ပြီး ကိုယ့်တပ်ကိုယ်ပြန်နင်းနေကြတာ တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ ဒါဟာ လူကြီးလူကောင်းမျက်နှာဖုံးစွပ်ထားတဲ့ ဘင်္ဂါလီအားပေး လုပ်ရပ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားရေးဆိုတာဟာ ကိလေသာကုန်ခန်းအောင် ရိပ်သာဝင်ပြီး တရားအားထုတ်နေတာမဟုတ်လို့ ဘုရားစာအုပ်ကြီးတွေနဲ့ နေရာတကာ ကိုင်ပေါက်လွန်းတာ မကောင်းပါဘူး။သူ့နေရာနဲ့သူသာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတာင်မှ အလောင်းတော်ဘ၀တွေက ငရဲကြီးခံပြီး စစ်တိုက်ပြီး ကိုယ့်လူမျိုးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကို လုပ်ခဲ့ရပါသေးတယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။
အမျိုးသားရေးလုပ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာသံဃာတော်တွေကို အစွန်းရောက်တယ်ပြောရအောင် ဒီသံဃာတော်တွေက သူများနိင်ငံကို မတရားကျူးကျော်ဖို့ သူများဘာသာကိုမတရားဖျက်စီးဖို့ ဘာသာခြားမိန်းကလေးကို မုဒိမ်းကျင့်သာသနာပြုဖို့ ဘယ်သူကမှ ဟောပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာနဲ့ ကိုယ့်လူမျိုး မိန်းမပျိုလေးတွေ မတရားအဖျက်စီးမခံရအောင် ကာကွယ်ဖို့ ဟောပြောနေကြတာပါ။ မိမိကိုယ်မိမိ ကာကွယ်ဖို့ ဟောပြောတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာသံဃာတော်တွေကို အစွန်းရောက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ ဝေဖန်ပုတ်ခတ်ပြီး စနစ်တကျစီမံကိန်းနဲ့မြန်မာပြည်ကို သိမ်းဖို့ လူသတ် မုဒိမ်းကျင့်ပြီး တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဘဲနဲ့တောင် တိုင်းရင်းသားပါလို့ လိမ်ညာဝါဒဖြန့်နေကြသူတွေကိုတော့ အစွန်းရောက်လို့ ထည့်မရေးထားတာဟာ တဖက်စောင်းနင်းနိုင်လွန်းလှပါတယ်။
သံဃာတော်တွေပေမဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံအရေးကို မျက်နှာလွှဲမနေနိုင်ရှာဘဲ စာသင်စာချလုပ်တဲ့အချိန်ထဲက အချိန်တွေဖဲ့ပေးပြီး ထောင်နှုတ်ခမ်းနင်းပြီး အမျိုးသားရေးလုပ်ကြတာကို ကျေးဇူးမတင်ရင်တောင်မှ မစော်ကားသင့်ပါဘူး။
ကိုယ့်အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာကိုကာကွယ်ဖို့လုပ်ကြတာကို အစွန်းရောက်တယ်လို့တံဆိပ်ကပ်ရင်တော့ဖြင့် အစွန်းရောက်ရုံမက တဖက်ကမ်းတောင် လွန်သွားပါစေ အစွန်းရောက်ချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရမ်းမျှမျှတတရှိတဲ့လူကြီးလူကောင်း သူတော်ကောင်းကြီးလို့ လူတွေ အထင်ကြီးခံပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်ဘာသာကွယ်ပျောက်သွားတာထက်စာရင် အစွန်းရောက်ဝါဒီနာမည်တပ်ခံပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံ၊လူမျိုးနဲ့ သာသနာကို ကာကွယ်နိုင်မဲ့ အမျိုးသားရေးကိုပဲ လုပ်သွားပါ့မယ်။
အမျိုးသားရေးဝါဒီ ဆရာတော်သံဃာတော်တွေ မြန်မာမျိုးချစ်တွေ အစွန်းရောက်တယ်ဆိုရင်လည်း ဒါဟာ အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်ဝါဒီတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရလို့သာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ နားလည်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်လည်ပင်းကို ဓားနဲ့လှီးမဲ့ အကြမ်းဖက်ဝါဒီတွေကို ယဿာနုဘာဝါတော ဆိုပြီး မေတ္တာသုတ်ရွတ်လို့မရလို့သာ ဆရာတော်တွေကပါ ဘင်္ဂါလီဆန့်ကျင်ရေး အော်နေရတာပါ။
ဗုဒ္ဓ တရားတော်တွေကို လိုရာဆွဲပြီး ဘင်္ဂါလီအားပေးလုပ်တာတွေကို မလိုလားပါဘူး။ ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကို သုံးပြီး သာသနာကို ဖျက်စီးမဲ့ ကျူးကျော်သူတွေကို အာပေးတဲ့လုပ်ရပ်တွေ မလုပ်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ဒီနေရာမှာ သင်္ကန်းဝတ်ထားပြီး သက်တော်ဝါတော်ကြီးနေတာတောင်မှ အမျိုးသားရေးအတွက် လိုအပ်လာရင် စစ်တပ်ထဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့ ရွှေည၀ါဆရာတော်လို အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ သံဃာတော်များကို ဦးညွှတ်ကန်တော့ပါတယ်။
(မှတ်ချက် ။အမျိုးသားရေးလုပ်တဲ့ ဆရာတော်တွေကို ဝေဖန်ထားတဲ့ စာရေးသူကိုတိုက်ခိုက် စော်ကားလိုခြင်းမရှိဘဲ သူရေးထားတာကိုသဘောမတူလို့ ဘကတအမြင်ကို ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။)
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 9:18 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ကရင်ပြည်နယ် ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းပေါင်းစုံမှ ထုတ်ပြန်လိုက်သော စည်းကမ်းချက် အပေါ် ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ အနာပေါ်ဒုတ်ကျပြီး ဆတ်ဆတ်ခါလျှက် အဆင့်တန်းမြင့်မားစွာ မီဒီယာပေါ်မှတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့
စကားလုံးက ဘာတဲ့ ..ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဖူးမကြားခဲ့ဖူးတဲ့ .
ဗုဒ္ဓဘာသာအကြမ်းဖက် ဆိုပါလားဗျာ ၊ ဘယ်လို ပညာရေးသင်ကြားပြီး ဘယ်လို အသိဥာဏ်နဲ့ လူလုပ်နေတာလဲလို့တောင် အံ့သြစွာ မေးရမလိုဖြစ်နေပါပြီ ။ တကမ္ဘာလုံးက ဒင်းတို့ကို အကြမ်းဖက်ဘာသာဝင်လို့ ယိုးစွတ်နေကြတာကိုမှ ပြုပြင်ပြီး နောင်တ တရားထားဖို့ မကြိုးစား ၊ ဝုန်းကနဲဆို လှည့်မကြည့်နဲ့ ဦးပေါင်းဖြူနဲ့ မုတ်ဆိတ်ဖွား ၊ လိမ်မလားဟေ့ မောင်တို့ရေ ၊ ညာမလားဟေ့ မောင်တို့ရေ
ဝေလေလေနဲ့ ညာသံပေး သံချပ်တိုက်ပြီး သာယာနေလိုက်ကြတာ တကမ္ဘာလုံးနဲ့ တို့ ပွကြီး ၊ ပြောတဲ့ ဆန်ကျင့်တဲ့သူကိုကြတော့ ၊ဘာသာရေးနှိပ်ကွပ်တယ် ၊ လူမျိုးရေးနှိမ့်ချတယ် ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်တယ်လို့ ဒင်းတို့ကပဲ လူပြန်ဟစ်ပြီး လူများပြီး အယားမပြေတဲ့ ပွကြီးတို့ တင်ဆက်ပုံလေးကတော့ လျှော့တွက်လို့တော့
ဒါဟာ ဘာသဘောလဲ ?? ဘက်စုံထောင့်စုံ၊ နေရာမျိုးစုံက ထကြွမည့် ပုံစံမျိုး သဘောဆောင်လာတဲ့ အချက်ပေးသံလေလား ??
OIC ပထွေးများ၏ ချီးမြှင့်မှု မျှော်လင့်ချက် မှေးမှိန်သွားချိန်နှင့် တပြိုင်နက်
ဒုတိယံမိ ရခိုင်အရေးအခင်းကို ဖန်တီးတယ် ၊ ပြီးတော့ ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားတဲ့ ထွင်လုံးပတ်လုံးတွေနဲ့ မီဒီယာအားကောင်းကောင်းနဲ့ ဖွပြဖို့ ၊
ကြိုးစားနေကြတယ် ၊ နောက်ပြီး ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ အသွင်ပြနိုင်အောင် ၊
ကုဘရ်နီ အိဒ်နေ့မှာ မြန်မာလူမျိုးတွေကပဲ နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးမဲ့ ပုံစံဖမ်းပြီး၊
လုံခြုံရေးယူပြီးတောင် ပွဲတော်ကျင်းပရပါတယ်လို့ အကြံအစည်နဲ့ လုံခြုံရေး
တောင်းတယ် ၊ သက်ဆိုင်ရာက လုံခြုံရေးမပေးနိုင်ကြောင်း ငြင်းပယ်တော့ ၊
ချော်လဲရောထိုင်ပြီး ရခိုင်အရေးကို လွှဲချပြီး မကျင်းပ သလိုလို ဘာလ်ိုလို စာတွေထုတ်ပြီး ၊ ပြည်တွင်းနေတွေကို သွေးကြွအောင် ဆန္ဒပြကြဖို့ ရန်ကုန်မြို့ကို ဦးတည်ပြီး လှုံ့ဆော်တယ် ။ တဖက်ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်းကိုလည်း လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ခံနေရတယ် ဆိုပြီး လူမျိုးရေး သွေးကြွလာအောင် ဖန်တီးနေတယ် ။ ကဲယခု ကရင်ပြည်နယ်မှာ ဗလီ ၂ ခုကို လက်ပစ်ဗုံးနဲ့ ပစ်ပါတယ်ဆိုပြီး ပြည်တွင်းနေတွေကို ဘာသာရေး သွေးကြွအောင် ဆောင်ရွက်လာကြပြန်ပါပြီ ။
ဘင်္ဂလီ အကျိုးတော်ဆောင်တွေရဲ့ စံနက်ဟာ တော်တော်သွက်သွက်လှမ်း
နေကြတာကို သတိထားမိနိုင်တယ် ၊ ရခိုင်အရေးကို မပြီးစေချင်သေး သလို ၊
တဆက်တည်း တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနှင့် ထကြွပြီး OIC လို အဖွဲ့အစည်းနှင့်တကွ တကမ္ဘာလုံးက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဖိအားပေးပြီး ၊
ဒင်းတို့ အလိုရှိတဲ့ ပြည်နယ်သော်လည်းကောင်း ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သော်လည်းကောင်း ၊ တနိုင်ငံလုံး မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အနု ၊ အကြမ်း မျိုးစုံနှင့် သာသနာပြုခွင့် စတဲ့ အခွင့် အရေးပေါင်းများစွာ တောင်းခံဖို့ အကြံအစည်ကို အိမ်မက် မက်ပြီး
ဂမူးရှူးတိုး နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံးပြီး လုပ်ဆောင်နေကြတာ သဘောမှာရှိသဗျ ။
ဆိုတော့ ၊ မြန်မာအစိုးရအနေနှင့် ဒီအရေးမှာ ပြန်လည် အသက်ဝင်လာတဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးကြောင့် ကိုင်ရ တွယ်ရ ခက်နေနိုင်ခြင်းကို ဒင်းတို့တွေက ထိထိမိထိ အချိန်ကိုက် အသုံးချနေခြင်းသာဖြစ်တယ် ။
ရခဲ့လျှင်ဖြင့် အမြတ်ပဲမို့ ၊ မရနိုင်ခဲ့လိုရှိလျှင်လည်း ဒင်းတို့အတွက် စတေးခံတွေက အပေါများဆုံးလူဦးရေနှင့် အနိမ့်ကျဆုံးသော
လူတန်းစားတရပ် အပြင် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ နှင့် အခြေတကျဖြစ်နေသော ပြည်တွင်းနေအစ္စလာမ်
ဘာသာဝင်တွေသာ ဖြစ်တယ် ။ ပြည်တွင်းနေတွေ အနေနဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်လာရသော ၊ လက်ရှိအခြေအနေတရပ်ကို တန်ဖိုးထားကြပါ ။ မိမိနှင့် ဘာသာတူ လူမျိုးတူတယ် ဆိုတိုင်း သွေးတွေပွက်ကြမယ်ဆိုလျှင်ဖြင့် ခင်ဗျားတို့ဟာ
အသုံးချခံ လူတန်းစား စားရင်းဝင်ပြီး ၊သူများမြှောက်ပေးတိုင်း လိုက်ကြွကြတဲ့ ငတုံးငအ ဥာဏ်နည်းတွေအဖြစ် သမိုင်းမှာ မှတ်တမ်းတင်ခံရမှာ မလွဲပါဘူး ။
အဲဒီတော့ တခုခုဆိုလျှင်တော့ ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနှင့် အစိုးရအပေါ်
သမိုင်းကို အမှောင်ချလိုက်ပြီလေ ...တို့
သတင်းကို ပိတ်ကားဖုံးထားကြတာပေါ့ ...တို့
ဘာစွဲချက် ညာစွဲချက်တွေ တင်ပြီး ကမ္ဘာကို မျက်ရည်ခံထိုးပြလိုက်မှာပေါ့...တို့
ဆိုတာက .. နောက်မှပါ ...
လောလောဆယ်ဆယ် ပြည်တွင်းမှာ အေးချမ်းစွာ နေထိုင်းစားသောက်နေရတဲ့ ပစ္စုပ္ပန်လေးကို အများဆန္ဒနှင့်အညီ တန်ဖိုးထားကြစမ်းပါ ။ ။
ဦးယဉ်ကျေး ။ ။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 9:23 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မရှိတာကို ရှိနေသလိုလိုနဲ့ နားယဉ်သွားအောင် ထပ်ခါတလဲလဲ ရိုက်သွင်းပေးသူတွေ ရှိနေတာကို သတိပြုကြရပါမယ်။ အဲဒီသူတွေကတော့ ရိုဟင်ဂျာ မြှင့်တင်ရေး (Rohingya Promotion) ကို လုပ်ချင်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပြောဆို သုံးစွဲကြပါတယ်။ ကန့်ကွက်သံတွေကို လေးစား လိုက်နာမှု မရှိဘဲ “ငါ့စကား နွားရ” ဆိုတဲ့အတိုင်း ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောဆိုကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ တကယ်ရှိတယ်လို့ ထင်အောင် လုပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဝါဒမှိုင်း ရိုက်သွင်းတာတမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာ မရှိပါဘူး။ လူမျိုးအနေနဲ့ လူ့သမိုင်းမှာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့တာကြောင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုလို့ မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မသုံးစွဲကြဘဲ ဘင်္ဂလီလူမျိုးလို့သာ ပြောဆိုမှသာ လုံလောက် မှန်ကန်တယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် မြန်မာတွေကမှ သစ္စာမစောင့်စည်းနိုင်ရင် မြန်မာမဟုတ်တဲ့ ဘယ်သူမှလာပြီး သစ္စာစောင့်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဆို တိုင်းပြည် ပျက်ဖို့သာ ရှိပါတာ့မယ်။ မြန်မာဖြစ်ရက်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖျက်ဆီးသူအဖြစ် သမိုင်းမှာ နာမည်ပျက်မခံကြရစေဖို့ ဂရုတစိုက် ရှိစေချင်ပါတယ်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 8:59 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မူလအကြောင်းရင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် ဒေသခံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ နယ်မြေတွေမှာ တဖက်နိုင်ငံက ဘင်္ဂလီတွေဟာ တရားမဝင် ခိုးဝင် နေထိုင် မွေးဖွားရင်းနဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိလာကြပါတယ်။
နည်းမှန်လမ်းမှန် မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပြဿနာတွေဟာ ပိုမို ကြီးမား ရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။ ဒီကြား ထဲမှာ ပိုမိုဆိုးဝါးလာစေတဲ့ အကြောင်းတခုကတော့ ခိုးဝင် နေထိုင် မွေးဖွားလာကြတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာလို့ နာမည်အတပ်ခံရပြီး နိုင်ငံသစ် တည်ထောင်ချင်သူတွေရဲ့ အကြံအစည်အောက်မှာ အသုံးချ ခံလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဘင်္ဂလာဒက်ရှ် နိုင်ငံထဲမှာ အခြေစိုက်ပြီး မြန်မာတပ်မတော်ကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ Rohingya Solidarity Organisation (RSO) အဖွဲ့နဲ့ အခြား ဘင်္ဂလီအဖွဲ့တွေကို ဒီနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ထွက်ခွာဖို့ ဘင်္ဂလာဒက်ရှ် အစိုးရက ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးထားပါတယ်။
ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို RSO နဲ့ အခြား ဘင်္ဂလီအဖွဲ့တွေ နောက်ထပ် စိမ့်ဝင်လာဖို့ အကြောင်း တရပ် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရုတ်တရက် ထဖြစ်လာတဲ့ အနာစိမ်း ဆိုရင်တော့ ကုသရတာ လွယ်ကောင်း လွယ်နိုင်ပါလိမ်မယ်။ ဒါပေမယ့် အမြစ် တွယ်နေတဲ့ အနာမျိုးဆိုရင်တော့ အချိန်ယူရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပဋိပက္ခမှာလည်း ဒီသဘောမျိုး ရှိပါတယ်။
မြစ်တွယ်နာကို အချိန်ယူ ကုသတယ် ဆိုပေမယ့် လတ်တလော နာကျင်မှု ပြေပျောက်အောင်တော့ လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ လက်ရှိ ပဋိပက္ခကို မကြီးထွားလာစေဘဲ ဖြစ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ရပ်ဆိုင်းစေဖို့ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်း ရပါမယ်။
တချိန်တည်းမှာ လိုအပ်လာတာကတော့ လုံခြုံရေး၊ စားစရာ နေစရာနဲ့ ကျန်းမာရေး ထောက်ပံ့ ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တဆင့်ကတော့ အဲဒီ ပဋိပက္ခကို ထာဝရ ချုပ်ငြိမ်းအောင် လုပ်ယူရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပဋိပက္ခမှာ ပါဝင်နေတဲ့ နှစ် ဘက် ကာယကံရှင်တွေရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြေလည်စေဖို့ ကြိုးပမ်းယူရ မှာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီအတွက် အချိန်ယူ ရမှာတော့ ရှိပါတယ်။
တကယ်လို့ တဘက်ဘက်က ငြိမ်းချမ်းရေးကို မလိုချင်ဘဲ တဖက်သပ် ဖြစ်နေဦးမယ် ဆိုရင်တော့ အချိန် ပိုမို ကြန့်ကြာနေဦးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းရေးကို ဘာသာရပ်တခုအနေနဲ့ အထူးလေ့လာ ကြရပါတယ်။
လူမျိုးသဘာဝနဲ့ ရေမြေနောက်ခံ အနေအထားအရ ကွဲပြားစွာရှိနေကြတာကြောင့် တကမ္ဘာလုံး
ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပဋိပက္ခချင်း အမျိုးအစား မတူကြပါဘူး။ ဒါတွေကို ပညာရှင်တွေက စနစ်တကျ ပိုပြီး သိကြ မှာပါ။
ပညာရှင် မဟုတ်ပေမယ့် ဗဟုသုတနဲ့ အတွေ့အကြုံရှိပြီး ဆင်ခြင် မြော်မြင်နိုင်စွမ်းအား မြင့်မားသူတွေ ဆိုရင်လည်း သိနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ အင်အားနဲ့အတူ တတ်သိပညာရှင်တွေက အချိန်ယူပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်ဖြစ်အောင် အခြေခံအုတ်မြစ်ကို စနစ်တကျ ချပေးနိုင်ကြရဖို့ ရှိပါလိမ့်မယ်။
အချိန်ယူ လုပ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာ နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေ ပြင်ဆင်တာနဲ့ အကောင်အထည် ဖော်တာတွေ ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းရမှာတွေ အတော်များနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ အသိ၊ ပညာပေးရေး ကိစ္စတွေ၊ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကိစ္စတွေကို တဖက်တလမ်းက ဖြည့်ဆည်းနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် နောင်အလျဉ်းသင့်ချိန်မှာ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ကြစေလိုပါတယ်။ အောင်မြင်သွားမယ်လို့ လည်း ယုံကြည်ထားပါတယ်။ လတ်တလောမှာ အရေးကြီးဆုံး လိုအပ်ချက်ကတော့ အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခ ဖြစ်နေတာတွေကို ရပ်ဆိုင်းစေပြီး လုံခြုံမှုနဲ့ ထောက်ပံ့မှုတွေ အလျင်စလို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာ ဒါကိုပဲ ကျနော်တို့ ပိုမို အာရုံစိုက်ထားသင့်ပါတယ်။ အခုလို ပဋိပက္ခကို အမြန်ဆုံး ရပ်ဆိုင်းသွားအောင် ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာ အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်စေဖို့ တာဝန်ရှိကြသူတွေဟာ အင်အား အကောင်းဆုံး ဖြစ်ဖို့ လိုသလို အင်အားကို သန့်စင်စေဖို့လည်း လိုအပ်မယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
အင်အားကောင်းလာစေဖို့ ဆိုရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သစ္စာရှိရှိနဲ့ တာဝန်ယူနိုင်ကြသူတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကျိုးကို လိုလားသူတွေ ပါဝင်လာတဲ့ အနေအထားကို ဆိုလိုပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် မြန်မာအစိုးရနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ပြည်သူလူထုနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အင်အားကို သန့်စင်ဖို့ ဆိုရာမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဗရုတ်ဗရက်တွေ ဖြစ်နေတုန်း အခွင့်အရေးယူ ကိုယ်ကျိုးရှာသူ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ထိန်းချုပ် ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ ကျိုးစီးပွားတွေ ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ အမျိုးအစားနှစ်ခုနဲ့ မတူတဲ့ အခြားတမျိုးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သစ္စာရှိပေမယ့် တာဝန်မယူသူ (သို့) တာဝန်ယူဖို့ မရဲသူ (သို့) စောင့်ကြည့်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကြားနေတဲ့သူတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ အေးအေးဆေးဆေး နေချင်ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်တခုခု ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖြစ်သွားမှာကို သူတို့လည်း စိုးရိမ်ပူပန်စိတ် ရှိကြပါတယ်။ အင်အားကောင်းဖို့နဲ့ အင်အားသန့်စင်စေဖို့အတွက် အမျိုးသားရေးအမြင်ဟာ အဓိကအကျဆုံး လိုအပ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားရေးလို့ ပြောရင် ညီညွတ်မှုကလည်း အလိုလို တွဲပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ တဦးနဲ့တဦး အပြန်အလှန် နားလည်မှု ရှိနေပြီး ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကျေပွန်အောင် လုပ်နိုင်ကြရင် အင်အားကောင်းတရပ်ကို စုစည်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုကို အမြန်ဆုံး တည်ဆောက်နိုင်မယ့် အင်အားဖြစ်တယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ အမှန်တကယ် နေရာတိုင်း အချိန်တိုင်းမှာ တိတိကျကျ တရားဥပဒေ စိုးမိုးနိုင်မှလည်း လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခကို ထိန်းချုပ် ရပ်ဆိုင်းစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်အားကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ ညီညွတ်မှုကို အလေးထားရာမှာ တဦးနဲ့တဦး အပြစ်တင် ဝေဖန်တာ
တွေ လျှော့နိုင်သမျှ လျှော့ကြဖို့၊ သည်းခံနိုင်သမျှ သည်းခံနိုင်ကြဖို့၊ ချော့မော့ထိန်းပေးကြဖို့ လိုအပ်နေပါ တယ်။
စေတနာထားကြတာ၊ အားမလို အားမရ ဖြစ်ကြတာ၊ ခံပြင်းနေကြတာ၊ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ် ပြင်းပျနေကြတာ၊ မကျေမနပ် ဒေါသတွေ ပေါက်ကွဲနေကြတာကို နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ တဖက်စွန်းရောက် သွားရင် ဆင်ခြင်တုံတရား ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပါတယ်။
နည်းလမ်းကောင်းတွေကို မစဉ်းစားနိုင်တော့ဘဲ မွှန်ထူသွားတတ်ပါတယ်။ သမာဓိကောင်းကောင်း ခေါင်း
အေးအေး ထားပြီး နည်းလမ်းကောင်းတွေကို တရားဥပဒေဘောင်ထဲကပဲ ကြံဆ စေလိုပါ တယ်။
ပြည်သူတွေဟာ အစိုးရကို ဒီနည်းအတိုင်း အမှန်တကယ် ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်ရင် ရကိုရမယ်လို့ ယုံကြည် ထား အပ်ပါတယ်။
ကိစ္စအတော်များများထဲက ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာနှစ်ခုကို ပေးရရင် မြစ်ဆုံကိစ္စနဲ့ အိုအိုင်စီ အလိုမရှိ ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကိစ္စတွေဟာ အမျိုးသားရေး အသွင်သဏ္ဍာန် ဖြစ်လာပြီး တကယ်ပဲ အစိုးရနဲ့ ပြည်သူတို့က တည်ငြိမ်စွာနဲ့ အောင်ပွဲဆင်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 1:45 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဗြိတိသျှတို့က မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ အကောင်းတိုင်း အစိတ်အပိုင်းလိုက်မြှုပ်နှံထားခဲ့တဲ့ စပစ်ဖိုင်းယားတွေကို ပြန်လိုချင်ပါသတဲ့ ။အခုမှသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တော့ အံများတောင်သြပါရဲ့ ။လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်ကျော်ကတည်းက ရှာဖွေနေခဲ့ပါသတဲ့ ။အခု မြှုပ်နှံခဲ့တဲ့ စစ်သားဟောင်းတွေရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့ apple ရဲ့ နည်းပညာတွေပေါင်းစပ်ရ...
ှာဖွေမှုနဲ့ လေယာဉ်းအစင်း ၂၀ ကျော် ကို ပြန်တူးပြီးအကောင်းတိုင်းပြန်ယူတော့မယ်တဲ့ ။
ကျွန်တော်တို့သဘောကတော့ မပေးရဘူး ။ဘာကြောင့်လဲ ။ဒီလေယာဉ်တွေဟာ ဗြိတိသျှသမိုင်းတင်မဟုတ်ပါဘူး ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသမိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမြေအောက်မှာ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော် အိပ်စက်နေခဲ့တာပါ ။ကျွန်တော်တို့လည်း ပိုင်တယ် ။ဒီလေယာဉ်တွေကို တူးဖော်ခွင့်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခိုင်မာစေမှာလို့ ဒေးဗစ်ကင်မရွှန်းကပြောတယ် ။ဟုတ်ပြီ ။ဒီလေယာဉ်အစင်း၂၀ ပြန်ပေးမှ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှာလား ။ဒါဆိုရင် ဘဲစားဘဲခြေ လေး ကစားကြည့်ရအောင် ။ကျွန်တော်တို့ဆီက သမ သွားတဲ့ ပတ္တမြား ငမောက်ကြီး ဘယ်ရောက်နေတုန်း ။
၁။သက္ကရာဇ် ၁၀၃၂ (အေဒီ ၁၆၆၁) လောက်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ အလေးချိန် ရတီကိုးဆယ်ကျော်ရှိသော ပတ္တမြား ငမောက်
၂။ဗဒုံမင်းလက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ ရတီချိန် နှစ်ဆယ်ခန့်ရှိတဲ့ လှော်ကားတင်ကလေး ဟုခေါ်သော ပတ္တမြား
၃။သက္ကရာဇ် ၁၁၉၉ (အေဒီ၁၈၃၇) ခုနှစ် ရွှေဘိုမင်းလက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ ရတီချိန်လေးဆယ်ကျော် လှော်ကားတင်ကြီး ဟုခေါ်သော ပတ္တမြား
၄။အလေးချိန် လေးဆယ်ရတီရှိ ဆင်ဖြူတော် ဟုခေါ်သော ပတ္တမြား
၅။အလေးချိန် ဆယ်ရတီရှိ ဆင်မတော် ဟုခေါ်သော ပတ္တမြား
၆။စံထားအသုံးပြုရတဲ့ အချိန်ခြောက်ရတီရှိတဲ့ စံကျောက်တော် ဟုခေါ်သော ပတ္တမြား
ပြီးတော့ သူတို့ပြတိုက်ထဲက စစ်သူကြီး မဟာ ဗန္ဓုလ ရဲ့ သံချပ်ကာ ဝတ်စုံ ကြီးကို ရောပြန်ပေးနိုင်မလား ။
ဧကရီဘုရင်မကြီးကို ပေးပို့သည့်ပစ္စည်းတွေထဲက သီပေါ၏ အကောင်းဆုံး သရဖူတစ်ခု၊ ဒုတိယ သရဖူမှ မြကျောက်ကြီးသုံးလုံး၊ သရဖူထဲမှ ကျွတ်ကျသည့် ကျောက်အလွတ် ၈ လုံးထည့်ထားသည့် စက္ကအိတ်တစ်လုံး၊ စိန်ဒေါင်းရုပ်ပါသည့် ဘယက်တစ်ကုံး နှင့် ရွှေဘီး တစ်ချောင်း
ဒါတွေဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်လုံးမနစ်နာတဲ့တောင်းဆိုမှူပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီသရဖူဟာ သီပေါမင်းဆီက သရဖူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ပြီးတော့ ဗြိတိသျှ ပြတိုက်တွေထဲက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ အနုပညာပစ္စည်းတွေ ပြန်ပေးမလား ။ကျွန်တော်တို့ အစိုးရကရော ပြန်တောင်းပေးမလား ။အခုဗြိတိသျှ ဘုရင်မကြီးခေါင်းက သရဖူက ဘာနဲ့လုပ်ထားတယ် ထင်လဲ ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနန်း စဉ်ကျောက်တွေနဲ့လုပ်ထားတာပါ ။တန်ဖိုးလား ။ဟုတ်ကဲ့ ဗြိတ်ိသျှနဲ့ပြင်သစ်နှစ်နိုင်ငံကမြေတွေကို အကုန်ဝယ်လို့ရနိုင်ပါတဲ့ တန်ဖိုးတွေပါ ။ ဒါတွေပြန်ပေးမလား ။
စပစ်ဖိုင်းယားတွေဟာ ဗြိတ်ိသျှရဲ့ အမျိုးသားရေးဂုဏ်တစ်ခုပါ ။တကယ်လေးစားဖွယ်ကောင်းပါတယ် ။ဒီတော့ကာ ဗြိတိသျှတွေဆီရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နန်းစဉ်ပတ္တမြားတွေကရော တန်ဖိုးမဲ့ခဲ့ပြီလား ။ဓါးပြတိုက်ယူသွားတဲ့ ကျောက်တွေမို့ အောက်ဈေးနဲ့ပဲ ရနိုင်တာပေါ့လို့ ဖြေသိမ့်တော့မှာလား ။အဲဒီကျောက်တွေကရော ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်တစ်ခုမဟုတ်တော့ဘူးလား ။ကမ္ဘာ့ကျောက်မျက်ရတနာလောကမှာ ပတ္တမြားငမောက်ဆိုတာ ဒဏ္ဍာရီအဆန်ဆုံး နာမည်အကြီးဆုံးပါ ။ Burmese Royal Ruby လို့တသွယ် SuFaYarLatt's Ruby လို့တနည်း နဲ့ ခုချိန်ထိ နာမည်ကြီးဆဲပါ ။တသသပြောလို့မဆုံးတဲ့ ကမ္ဘာ့ကျောက်မျက်လောကရဲ့ စနိုးဝှိုက်ပုံပြင်တစ်ခုပါ ။ ကိုင်း ....အဲဒါနဲ့ တည့်-တည့် ပြန်ချိန်းလိုက်ရအောင်လား ။နိုင်ငံရေးစကားနဲ့ဆိုရရင် Win-Win အခြေအနေပါပဲဗျာ ။
အခု ကမ္ဘာမှာ ဝေဟင်မှာ မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ စပစ်ဖိုင်းယားဟာဆိုရင် ၃၆ စီးလို့ဆိုပေမယ့် လက်တွေ့မှာ အစီး ၃၀ သာ တကယ်မောင်းနှင်နိုင်ပါတော့တ ယ် ။အဲဒီ အစင်း ၃၀ ဟာလည်း တစ်စုတစ်စည်းတည်း မရှိပဲ နေရာအနှံပြန့်ကျဲနေပါတယ် ။ဒီတော့ကာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အစင်း ၂၀ လုံလုံး တစုတစည်းတည်း အကောင်းပတိ ရှိနေပါတယ် ။ ဒီအစီး ၂၀ ကိုပြတိုက်ထဲထည့် လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံခြားငွေ ဘယ်လောက်စီးဝင်လာမလဲ ။ ဒါမှမဟုတ် ၁၀ စီးကို ပြတိုက်ထဲထည့် ၁၀ စီးကို အကောင်းအတိုင်းပြန်ဆင်ပြီး အပျော်တမ်းကလပ်ပုံစံ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ လေ့လာသူတွေအတွက် မောင်းနှင်စီးနင်းနိုင်အောင် လုပ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် ???? ။
သူတို့ဒီလေယာဉ်တွေကို စရှာဖွေကတည်းက အခုချိန်ထိ ဒေါ်လာ နှစ်သိန်းတစ်သောင်းကျော် ကုန်ကျပါတယ်လို့ ပြောခဲ့တယ် ။ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော်တို့သာဆိုလျှင် ရှာဖွေပေးခဲ့တဲ့ ဒေးဗစ်ဂျေကန်ဒယ်လ် ကို ဒေါ်လာ သိန်းနှစ်ဆယ် ဆုချလိုက်ပါ့မယ် ။ဘာကြောင့်လဲ ။
ဗြိတိသျှ သားတွေဟာ ကျွန်တော်တို့လိုမျိုး ဇာတိဂုဏ်ကို သိပ်တန်ဖိုးထားသူတွေပါ ။ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေကို ကျွန်တော်တို့ဆီလာကြည့်လာလေ့လာရမှာပါ ။အဲဒီတစ်ခုတည်းနဲ့တင် ကျွန်တော်တို့ မီးခိုးမထွက်တဲ့ စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေဆီကနေ နိုင်ငံခြားငွေ ထိုင်ယူနေရုံပါပဲ ။ဘယ်လောက်ကြာအောင် ထိုင်ယူနေမှာလဲ ။ဒီလေယာဉ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေသမျှ နဲ့ နောင် သားစဉ်မြေးဆက်အထိ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ နိုင်ငံခြားငွေသဲ့ယူလို့ရမဲ့ အရာတွေပါ ။
သူတို့ကလည်း သူတို့နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်ယူစရာ အမွေအနှစ်ကြီးတွေကို ပြန်တောင်းတယ် ။ကျွန်တော်တို့ကလည်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရတနာတွေ ယဉ်ကျေးမှူအမွေအနှစ်တွေ ပြန်တောင်းတယ် ။ကဲ.ဒါ ရာဇဝတ်မှူလည်းမဟုတ်ဘူး ။ မလုပ်ရတဲ့ စည်းမျဉ်းလည်း မဟုတ်ဘူး။သူတို့လူမျိုးဟာကျတော့ သိတတ်ပြီး
ကျွန်တော်တို့ ဟာတွေကျတော့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြတိုက်ထဲထည့်ပြီး သူတိုိ့နိုင်ငံက လုပ်စားပြစား ဂုဏ်ယူနေတာတော့ မဟုတ်သေးဘူးခင်ဗျ ။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 11:21 PM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အစိပ်သား စစ်သားအမတ်တွေ လွှတ်တော်မှာ ကြိုးကြိုးစားစား
နိုင်ငံတော်သမ္မတအနေဖြင့်မိမိတို့ အစိုးရလက်ထက်တွင် တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများကို ပွင့်လင်း မြင်သာအောင် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ပတ်သက်သော လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကို ချုပ်ငြိမ်းအောင် အဆင့် သုံးဆင့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရွက်ရာတွင် Peace Center တစ်ခုကို မကြာမီ ဖွင့်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိ
ုင် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားရာ ဒေသ၌ အေးချမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခများက ဆုံးရှုံးမှု များကြောင်း၊ ဒေသတွင်း တိုင်းရင်းသားများ အိမ်ရာများကို စွန့်ခွာပြေးသွားခြင်းက စိတ်မကောင်းဖွယ် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကချင်ဒေသကိငြိမ်းချမ်း စေလိုကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဆိုပါက မကြာမီတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို မျှော်လင့်နိုင်မည်ဟု နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောကြားနေသော်လည်းပဲလွှတ်တော်တွင်းတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် မည်သည်ကိုမျှ အာရုံ့မရှိဘဲ သတင်းစာ၊ဂျာနယ်ကိုလွပ်လွပ်လပ်လပ်ဖတ်ရှုနေနိုင်သေးသည်ကိုအံ့သြစွာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။
Min Thithtoo ဖေ့ဘုတ်မှမျှဝေသည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:07 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မမျှတ တဲ့ ဇာတ်ပေါင်းခန်း
“အာဏာရှင်ဇာတ်တော်ကြီး” က တရားဝင်နိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံမှာ ကန့်လန့်ကာချပြီးသွားပြီ ဆိုပါစို့...။ ပွဲသိမ်းသွားပြီပေါ့..။ သိမ်းသွားပြီးတဲ့ ဇာတ်ခုံနံဘေးမှာ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ရင်း ငုတ်တုတ်ကျန်ခဲ့သူ နှစ်ဦးကတော့ “တပ်မတော်” နဲ့ “ပြည်သူ” နှစ်ဦးပါပဲ...။ ပြည်သူလည်း ဆင်းရဲ.. တပ်မတော်လည်းမွဲ...။ ပြည်သူတွေလည်း အဘက်ဘက်ကနောက်ကျ.. တပ်မတော်ကလည်း နည်းစနစ်တွေနိမ့်ကျြ
ပီး နှစ်ဦးစလုံး မပြောင်ရောင်ကြတော့ပါဘူး...။ နှစ် ၅၀ အကျပ်အတည်းထဲမှာ ပြည်သူအများဆင်းရဲပြီး လက်တစ်ဆုပ်စာလောက်သာ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး စာရင်းတွေဝင်ခဲ့သလို... တပ်မတော်သား အများစုဟာလည်း ဆင်းရဲပြီး လက်တစ်ဆုပ်စာ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ကြံရာပါ အပေါင်းအပါအချို့ ထားစရာနေရာမရှိလောက်တဲ့အထိ ချမ်းသာခဲ့ကြတယ်လေ...။
( The Messenger ဂျာနယ်)
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 1:50 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ရခိုင်တွင် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားသော မြို့နယ်များနှင့် နယ်စပ်ဒေသကို လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်
ပေါက်တောတွင် ဘင်္ဂါလီများ မီးရှို့နေမှု မြင်ကွင်း
ပဋိပက္ခများ ထပ်မံ ဖြစ်ပွား နေသော ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ် ခုနစ် မြို့နယ်နှင့် နယ်စပ် မြို့များ ဖြစ်သော ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော မြို့ များတွင် အောက်တိုဘာ လ ၂၅ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း မှ စတင်ကာ လုံခြုံရေး အင်အား တိုးမြှင့် လိုက်ကြောင်း ရခိုင် ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ သတင်း ပြန်ကြားရေး ကော်မတီဝင် ဦးမျိုးသန့် ကေ
လုံခြုံရေး အင်အား တိုးမြှင့် လိုက်သည် ဆိုသော်လည်း အင်အား မည်မျှ တိုးမြှင့်သည် ကိုမူ သေသေ ချာချာ ပြော ကြား နိုင်ခြင်း မရှိ သေးကြောင်း ၄င်းက ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့၊ ကျောက်ဖြူမြို့၊ မင်းပြားမြို့ များတွင် ပဋိပက္ခ များ ထပ်မံ ဖြစ်ပွား နေသဖြင့် ညမထွက်ရ အမိန့် (ပုဒ်မ ၁၄၄) ထုတ်ပြန် ထားသော်လည်း ထိရောက်မှု နည်းပါး နေသဖြင့် ပဋိပက္ခ မှုများ အဓိက ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသော မြို့နယ် များတွင် "လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အား မြှင့်တင်ခြင်း၊ လုံခြုံရေး အဆင့် တိုးမြှင့်ခြင်း များ ဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတ က ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန် ခဲ့ကြောင်း " နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေး ၏ facebook စာမျက်နှာ တွင် အောက်တိုဘာ လ ၂၄ရက်နေ့ ညနေ ၅နာရီ ခန့်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်နှင့် ၂၃ ရက်နေ့ တို့တွင် မြောက်ဦး မြို့နယ် နှင့် မင်းပြား မြို့နယ် များတွင် မီးရှို့မှု၊ သေဆုံးမှု များ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၂၃ရက်နေ့ တွင် ကျောက်ဖြူ မြို့နယ်နှင့် မြေပုံ မြို့နယ် များသို့ ကူးစက် ခဲ့ကာ ၂၅ရက်နေ့ တွင် ကျောက်တော် မြို့နယ်၊ ရသေ့တောင် မြို့နယ် နှင့် ပေါက်တော မြို့နယ် များသို့ပါ ကူးစက် ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်း ပဋိပက္ခ များကြောင့် သေဆုံးသူ ၅ဦး ရှိပြီဟု ကနဦး သတင်း ရရှိ ထားသော် လည်း သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာ ရရှိမှု နှင့် ပျက်စီး ဆုံရှုံးမှု စာရင်းများ ကို အတိအကျ မထုတ် ပြန် နိုင်သေးကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက်များ အရ သိရှိ ရသည်။
အဆိုပါ ပဋိပက္ခ များကြောင့် သေဆုံးသူ၊ ဒဏ်ရာ ရရှိသူ ဦးရေ မြင့်တက်လာပြီ ဖြစ်ပြီး ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှု များ လည်း ပိုမို များပြား လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံ များထံ ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက်များ အရ သိရှိရသည်။
အဆိုပါ ပဋိပက္ခ များနှင့် ပတ်သက် ၍ လုံခြုံရေး တာဝန် ရှိသူများ ထိရောက်သော လုပ်ဆောင် မှုများ အမြန်ဆုံး လုပ်ဆောင်ရန် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) က သဘောထား ထုတ်ပြန်ပြီး ဆူပူ အကြမ်းဖက် မှုများ လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းရေး ရဟန်းရှင် လူ ပြည်သူ လူထု အားလုံး ဝိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက် ကြရန် ၈၈ မျိုး ဆက် ကျောင်းသား များ က မေတ္တာ ရပ်ခံချက် တို့ အသီးသီး အောက်တိုဘာ လ ၁၅ရက် နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:09 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဦးဇော်ဌေး ၏ facebook စာမျက်နှာမှ
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:21 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ရခိုင်ပြည်နယ်-ကျောက်ဖြူမြို့နယ် မြို့ခံတစ်ဦးကို တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
NOM-ကျောက်ဖြူ နောက်ဆုံးအခြေအနေ ပြောပြပေးပါ။
-ကျောက်ဖြူမြို့ခံ ကိုနိုင်နိုင်ထွန်း-အခု ၅နာရီဝန်းကျင်အခြေအနေကတော့ ကုလားတွေနေတဲ့ရွာတစ်ရွာ လုံးမီးကျွမ်းသွားပြီ၊သူတို့စရှို့တာပေါ့၊ဘာမှမရှိတော့ဘူး၊မြေပြင်ပဲကျန်တော့တယ်။ကုလားတွေကတော့ မော်တော်ဘုတ်အစီး(၂၀-၃၀)၀န်းကျင် နဲ့ ပင်လယ်ထဲမှာ ၅စီးလောက်ထွက်သွားပြီ။
NOM-အခု ကျောက်ဖြူမြို့ရဲ့ လုံခြုံရေးအခြေအနေ ဘယ်လိုရှိလဲဗျ။
-ကျောက်ဖြူမြို့ခံ ကိုနိုင်နိုင်ထွန်း-အခုကြားနေတာတော့ ညမထွက်ရအမိန့် (၁၄၄)ထုတ်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ကြားတယ်။တရာဝင်တော့ မကြေညာသေးဘူး။မနေ့ည (၇)နာရီလောက်က မီးလောင်ခဲ့တဲ့
ကျောက်ဖြူမြို့ ရခိုင်ပိုက်ဆိပ်ရပ်ကွက် မီးလောင်တာကို သွားငြိမ်းတဲ့ သူတွေကို ကုလားတွေက ဂျင်ကလိနဲ့ ပစ်တယ်။မနေ့ညကတည်းကနေ အခုထိ မအိပ်ရသေးဘူး။
-ကျောက်ဖြူမြို့ခံ ကိုနိုင်နိုင်ထွန်း-ရှိတယ်။ရခိုင်ဘက်ကတော့ ၁ ယောက် သေတယ်ပြောတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူကတော့ ကုလားရော ရခိုင်ရော မနေ့ညကတင် ပေါင်း ၃၀ယောက် လောက် ဒဏ်ရာရတယ်။
ကုလားတွေဘက်က ဂျင်ကလိနဲ့ ပစ်လို့ ဒဏ်ရာရတာလေ။ကုလားတွေ စရှို့တဲ့ မီးကို အကုန်ဝိုင်းငြိမ်းတဲ့ အချိန်မှာ ပစ်တာ။မီးသတ်ကားတွေ လာငြိမ်းတယ်။အဲ့ဒီ့လာ ငြိမ်းတဲ့ မီးသတ်ကားကိုလဲ ဂျင်ကလိနဲ့ ပစ်တယ်။
ရဲတွေ စစ်တပ်တွေ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်ဘူး။
NOM-ရဲနဲ့စစ်တပ်က လုံခြုံရေး ဘယ်လိုပေးလဲ?
ကျောက်ဖြူမြို့ခံ ကိုနိုင်နိုင်ထွန်း-ဒီနေ့ညတော့ ရဲနဲ့စစ်တပ် က လုံခြုံရေး ပေးမယ်။အခုကြားနေတာတော့ ညမထွက်ရအမိန့် (၁၄၄)ထုတ်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ကြားတယ်။သေချာတဲ့ လုံခြုံရေး အခြေအနေ တော့ မပေးသေးပါဘူး။
(NOM မှ သေချာခိုင်လုံသော ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းများကို ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမည်။)
Reference and Credit to -ဆက်သွယ်မေးမြန်သူ-လျှံဘုန်းထက်(NOM)
အေးချမ်းမွန်မှ News of Myanmarတွင်ဖော်ပြသော သတင်းကို မူရင်းအတိုင်းမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:17 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများနှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွား
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ပုရိန်ကုန်းရွာ၌ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများနှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကြား
ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အိမ်ခြေငါးဆယ် မီးလောင်ခဲ့ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးလှသိန်းက ပြောသည်။
''သူတို့တွေက လူစုတယ်ပြောတယ်။ လူစုတဲ့အခါ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်မီးရှို့တယ်။ မီးရှို့တဲ့အခါ ရခိုင်ဘက်ကဘုန်းကြီးကျောင်းကို မီးလောင်တယ်။ အသေးစိတ်တော့ မသိဘူး'' ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ ပုရိန်ကုန်းရွာတွင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုး အိမ်ခြေ ၅၀၀ ကျော်နှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား အိမ်ခြေ ၁၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း
ပဋိပက္ခများ ဆက်လက်မဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ၀န်ကြီးနှစ်ဦးသည် ပုဏ္ဏားကျွန်း၊
ကျောက်တော်၊ မင်းပြားနှင့် မြောက်ဦးမြို့နယ်များမှ မြို့မိမြို့ဖများနှင့် တွေ့ဆုံရန် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ထွက်ခွာသွားကြောင်း
ဦးလှသိန်း၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:41 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မြန်မာနိုင်ငံ မှ ရဲ။ လဝက ၊ စသုံးလုံး နှင့် ထောက်လှမ်းရေးများ စီမံကိန်း(သို့)စစ်ဆင်ရေးလုပ်ကာ အမြန်ဆုံးစုံစမ်းရေးလုပ်ပါ။ ယခုအခါ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွါးသော အတိကရုန်း များကို ပြည်တွင်းရော ပြည်ပရှိ ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင် ကွန်ယက်အချို့မှ တိုက်ရိုက်ကြိုးကိုင်ညွန်ကြားနေပါပြီ။ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးတွင် အထူးသဖြင့် ရန်ကုန် တွင် အကြောင်းအ
မျိုးကြောင့် ရောက်ရှိနေသော ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ နှင့် လက်ရှိ ရခိုင်မှ အထူးသဖြင့် မောင်တော/စစ်တွေမြို့နယ်မှ ဘင်္ဂါလီ ကွန်ယက်ကို အမြန်ဆုံးခြေရာခံကြပါ။ သူတို့၏ အဖွဲ့သည် RSO အပါအဝင် အခြားနိုင်ငံတချို့မှ မွတ်စလင် အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက် ကွန်ယက်နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည် ။ အင်တာနက်မှာရော ပြည်ပမီဒီယာများသို့ပါ သွေးထိုးလှုံ့ဆော် ဝါဒဖြန့်မှုတွင် ပြည်တွင်းမှ ဘင်္ဂါလီအချို့ တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သတ်နေသည် ။ အထူးသဖြင့် ဤကွန်ယက်တွင် ပညာတတ် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးအချို့ ပါဝင်ပတ်သတ်ဦးဆောင်နေသည်။ မသင်္ကာဖွယ် ဘင်္ဂါလီအချို့တို့၏ လုပ်ငန်းများ ဘဏ်စာရင်း အဝင်အထွက် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို စတင်ခြေရာခံပါ ။ အနာဂတ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သီးခြားလွှတ်လပ်သော အစ္စလာမ်မ့် နိုင်ငံ/ပြည်န
ယ် အဖြစ်ထူထောင်သွားရန် ကြီးမားသော အစီအစဉ် များ အကြမ်းဖက်တိုက်ပွဲဝင်မှုအတွက် လက်နက်/ ငွေကြေး / နည်းပညာ အထောက်အပံ့များ ရယူပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့များအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံရှိမြို့ကြီးများ နယ်စပ်မြို့များရှိ အစိုးရအဆောက်အအုံများ လူစည်ကားရာ ဈေးဝယ်စင်တာများ ခရီးသွားပို့ဆောင်ရေးနေရာများကို ပစ်မှတ်ထား၍ ဗုံးခွဲမှုများ ပေါ်ပေါက်လာမည်။ ပြည်သူများအနေဖြင့် ပွဲလမ်းသဘင် အခမ်းအနား လူစည်ကားရာနေရာများတွင် သတိဖြင့်သွားလာလှုပ်ရှားကြပါ။ အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်လဲလုံခြုံရေးကို ယခင်ကထပ် ပိုမိုတိုးမြှင့်ပေးပါ ။ ယခုအချိန်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကာလ နှင့် အခြားနိုင်ငံများတွင်ဖြစ်ပွါးနေသော ဘာသာရေး။လူမျိုးရေး အရေးအခင်းဖြစ်နေချိန်များတွင် အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားများအတွက် အလွန်တရာမှ အခွင့်ကောင်းအချိန်ဖြစ်သည် ။ ပြည်သူများအနေဖြင့်လဲ မသင်္ကာဖွယ် မျက်နှာစိမ်းလူမျိုးများ၏ ထူးခြားဖြစ်စဉ်များကိုတွေ့လျင် သက်ဆိုင်ရာသို့ချက်ခြင်းအကြောင်းကြားပါ ။လူစည်ကားရာနေရာများတွင် ကျောပိုးအိပ် လက်စွဲအိပ် အပါအဝင် မသင်္ကာသော အထုပ်အပိုး များကို ပိုင်ရှင်နှင့်အတူမမြင်လျင် သတိထားပါ။ ထို့အပြင် ကားများ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့်ပါ ချိန်ကိုက်ပြီး ဗုံးထောင်နိုင်ပါသည် ။ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ယခုအချိန်မှ စ၍ အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်များကို ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ရန် စီမံကိန်းများ ချမှတ်ထားသင့်သည်။ မဖြစ်လာသေးခင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှ စိတ်ချရမည် ။ သတိသည် ပိုသည်မရှိပါ ။
( အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်မှုကို မလိုလားသူတဦး )
Facebook မှဝင်လာသော message တခု
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:33 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
-ကလေးမြို့နယ်အတွင်း ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီများ အဆက်မပြတ် ၀င်ရောက်လာခြင်းကြောင့် ဒေသခံများ စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
''ကလေးမြို့နယ်အတွင်းကို စက်တင်ဘာလကနေစပြီး အခုအချိန်အထိ ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေ မိတာ လေးကြိမ် ရှိပါပြီ ။ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့
ညကပဲ ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီအမျိုးသမီး တစ်ဦး မိတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ ကနေပြီး ဒီကနေ့ အထိ တစ်လကျော်ကျော်ကာလအတွင်းမှာ ၃၁ ယောက် ရှိပါပြီ ။
ဒါ့ကြောင့် ဒေသခံတွေကို ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်း သတင်းပေးနိုင်အောင် အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေကို တချို့ အဖွဲ့အစည်းတွေက ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ဥပဒေနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး ၀င်ရောက်လာသူတွေကို ချင်းတောင်ခြေဒေသကနေ ဖြတ်သန်း ၀င်ရောက်လာရင် သူတို့ကို ဖမ်းဆီး ဆောင် ရွက်နိုင်အောင် ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကို အကြောင်းကြားရမယ်ဆိုတဲ့အသိ ရအောင်ပြောဆိုကြတာပါ ။ ဒီလိုဥပဒေနဲ့
မညီပဲ ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘယ်လိုလူ မဆို နိုင်ငံတွင်း မှာ လက်မခံ နိုင်ပါဘူး '' ဟု ကလေးမြို့ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကလေးမြို့နယ် အတွင်း ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ ခိုးဝင်လာသည်မှာ ရက်သတ္တသုံးပတ် ဆက်တိုက်အတွင်း ဖမ်းဆီး ရရှိခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် ခိုးဝင်လာသူ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ကလေးမြို့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ဗလီကျောင်းအနီးတွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
''အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ ကလေးမြို့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၊ မြို့မဈေး ၊ ဗလီ ကျောင်းအနီးမှာ ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီအမျိုးသမီး မနိုအာရှား (အဘ) ဦးဆောမီးအူးလာ ၊
ရွက်ညော်တောင်ရွာ ၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး နေပါတယ်''ဟု ကလေးမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
''ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်း ဒီလိုခိုးဝင်လာသူတွေ ဖမ်းဆီးရရှိမိအောင် ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်း သတင်းပေးဆောင်ရွက်
သင့်ပါတယ်''ဟု ကလေးခရိုင်မှ ရွေးကောက်ခံ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းလှိုင်က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:29 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မနန်းခင်ဇေယျာ သည် Miss Internet ဆု၊ People Choice Award ဆုနှင့် ရေကူးဝတ်စုံ ဆု အတွက် ရွေးချယ်ခံခဲ့ ရ
အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် မယ် နိုင်ငံ တကာ (Miss International)
ကို မြန်မာ နိုင်ငံ ကိုယ်စား ပြုကာဝင်ရောက်ယှဉ် ပြိုင် ခဲ့သည့် မနန်းခင်ဇေယျာ သည် Miss Internet ဆု၊ People
Choice Award ဆုနှင့် ရေကူးဝတ်စုံ ဆု အတွက် ရွေးချယ်ခံခဲ့ ရသည်။
အင်တာနက်အဆိုးဆုံး နိုင်ငံကလာပြီး Miss Internet ဆုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကရင်ပြည်နယ် သာသနာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ခြံမြေ လယ်ယာများ မွတ်စလင် တို့ကို ရောင်းချခြင်းမပြုရဟု ထုတ် ပြန်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ခြံမြေ လယ်ယာများ မွတ်စလင် တို့ကို ရောင်းချခြင်းမပြုရ ဟူသော အချက်အပါအ၀င် စည်းကမ်းချက် ၄ရက် ကရင် ပြည်နယ် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သာသနာတော် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့
မှ ထုတ် ပြန် ဟူ ၍ အမှတ် (၈
၁ ) အောက်တိုဘာ ၁၉ရက်နေ့ ၊၂၀၁၂ နေ့ ထုတ် မြန်မာပို့စ် ဂလိုဘယ် သတင်းဂျာ
နယ် မျက်နှာ ဖုံးပေါ် တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
• ဘားအံမြို့ မဲဘောင်ကျောင်းတိုက် အတွင်း ကျင်းပခဲ့သော အစည်းအဝေးတွင် ဘားအံမြို့ ရပ်ကွက်ပေါင်း ၉ခု အနက် အမှတ် ၂ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှု မှလွဲ၍ ကျန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး များ အပါအ၀င် လူပေါင်း ၁၀၀ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း
• ဇွဲကပင် တောင် ဆရာတော် ဦးက၀ိဓဇက စည်းကမ်းချက်လေးရပ်ကို ကြေညာခဲ့သည်
• ၄င်းစည်းကမ်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက ထိရောက်သောပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခံရမည့်ဖြစ်ကြောင်း၊
• အောက်တိုဘာ ၁၄ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးအပြီး နောက်တစ်ရက်တွင် တစ်မြို့လုံးသို့ ဖြန့်ဝေကြောင်း
• ယင်းအစည်းအဝေးမတင်မီ ကရင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဇော်မင်း ဇွဲကပင်တောင်ဆရာတော်အား လာရောက်ဖူးခဲ့ကြောင်း၊
• ဗုဒ္ဓဘာသာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အား ကရင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ၊ ကရင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန နှင့် သက်ဆိုင်ရာသို့ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
News credit to myanmar post global journal
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 1:20 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
နိုင်ငံများ စုပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားသော
OIC(Origanization of The Islamic
Cooperation) က မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ရုံး
စိုက်မည် ဟု သတင်း များထွက်ပေါ်
လာသည့် အတွက် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး
နှင့် ရခိုင် ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ တို့တွင် OIC ကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်မှု များ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ တွင် OIC ရုံးကို လုံးဝ ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ယနေ့ နေပြည်တော် တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တွင် ကတိပေး ပြောကြားသည်။
" အဲ့ဒီ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ လုံးဝ စိတ် မပူကြရန် ကျွန်တော် ပြောလို ပါတယ်" ဟု နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ပြောဆိုသည်။
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မကြီး ဦးသိန်းစိန် က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တစ်ရပ် ကို အောက်တိုဘာ လ ၂၁ ရက်နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်း သတင်းဂျာနယ် ၇၈ စောင် နှင့် နိုင်ငံခြား သတင်း အေဂျင်စီ ၂၈ ခု အပါအဝင် သတင်းထောက် ၁၃ဝ ဦးခန့် တက်ရောက် ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတ အနေဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာ များကို တရားဝင် ဖိတ်ကြား၍ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခြင်း သည် ပထဆုံး အကြိမ် ဖြစ်သည်။
OIC သည် ရန်ကုန်မြို့ နှင့် စစ်တွေ မြို့တွင် မကြာမီ ရုံးစိုက်မည် ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်ရုံး ကို ဗီဇာကိစ္စ အပါအဝင် ထောက်ပံ့ရေး အစီစဉ် များ အတွက် ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ကာ စစ်တွေရုံး ကို ထောက်ပံ့ရေး ကိစ္စများ အတွက် ရုံးစိုက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အစ္စလာမ် ဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ မခွဲခြား ဘဲ ထောက်ပံ့ ကူညီ သွား မည် ဖြစ်ကြောင်း OIC မွတ်ဆလင် လူနည်းစု ရပ်ဝန်း ဌာန ၏ ရိုဟင်ဂျာ အရေး ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံ မစ္စ ဒီနာမန်ဒနီ ၏ ပြောကြားချက် ကို ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ် တွင် အောက်တိုဘာ လ ၁ဝ ရက်နေ့ က ဖော်ပြ ခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့တော် စစ်တွေ မြို့တွင် အောက်တိုဘာ လ ၁ဝ ရက်နေ့ က အမျိုးသမီး များ အပါ အဝင် ဒေသခံ ၄ဝဝဝ ခန့် သည် "Get Out OIC, No OIC, Stop OIC" စသည့် စာတန်း များ ပါဝင်သည့် အင်္ကျီ များ ကို ဝတ်ဆင်ကာ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ် ခဲ့ကြကြောင်း ဒေသခံ များထံမှ သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း OIC ရုံးစိုက်မည် ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ် လာမှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ ကော့က်ဘဇား နှင့် စစ်တကောင်း ဒေသ တို့တွင် ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် များ အကြမ်းဖက် ခံရမှု များ အတွက် ရန်ကုန်မြို့ နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တို့တွင် သံဃာတော် များ အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား များ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်မှု များ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သည်။
The Voice Weekly .
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 12:12 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဘင်္ဂလားမှ ခိုးဝင် နေထိုင်သူများကြောင့် အိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်း တြိပူရ ဒေသတွင် ဒေသခံ ရခိုင်မျိုးနွယ်ဝင် တိုင်းရင်းသားများ တြိပူရပြည်နယ် သီးခြားသတ်မှတ်ပေးရန် ဆန္ဒပြ
ဘင်္ဂလားမှ ခိုးဝင် နေထိုင်သူများကြောင့် အိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်း
တြိပူရ ဒေသတွင် ဒေသခံ ရခိုင်မျိုးနွယ်ဝင် တိုင်းရင်းသားများ
တြိပူရပြည်နယ် သီးခြားသတ်မှတ်ပေးရန် ဆန္ဒပြနေကြသည်ကို
အောက်တိုဘာလ ၁၅ရက်နေက တွေ့မြင်ရပုံ။
Members of the Indigenous people's front of the Indian state of Tripura cry duringaprotest demanding the creation ofanew state based on scheduled areas and population of Tripura state, in New Delhi, India, 15 October 2012. They also demanded that the government control the infiltration of foreign nationals mainly from Bangladesh as Tripura is situated at the trans-International border of Bangaldesh and Myanmar in the North east of India.
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 11:55 PM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ရခိုင်ပြည်ကို အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံ ထူထောင်ရန် အကြမ်းဖက်ဘင်္ဂလိ(၁၁)ဖွဲ့ ပူးပေါင်း
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 11:50 PM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မြန်မာတွေ ဒံပေါက်ကြိုက်ကြပါတယ်။ မကြိုက်တဲ့လူထက် ကြိုက်တဲ့လူကပိုများကြောင်း ကြက်လျှာစွန်း၊ ကောင်းကြိုက်၊ ရွှေညောင်ပင်၊ နီလာ၊ ယုဇန အစရှိတဲ့ ဒံပေါက်ဆိုင်များ နေရာအနှံ့ လမ်းဆုံလမ်းခွနေရာကောင်းတွေမှာရှိတဲ့ ဆိုင်ခွဲပေါင်းများစွာက သက်သေထူလျှက်ရှိနေပါတယ်။
ကောင်းပါပြီ၊ အကယ်၍ ညီအကိုမောင်နှမတို့ အနေနဲ့ မွတ်စလင်ကုလားတို့၏ ဒံပေါက်ဆိုင်၊ စီးပွားရေး၊ လုပ်ငန်း၊ ဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူ၊ စားသုံး၊ အားပေးလိုက်သောငွေသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ဘုရား၊ စေတီ၊ သိမ်၊ ကျောင်း၊ ဇရပ် သော်လည်းကောင်း၊ ဆရာတော်သံဃာတော်၊ သီလရှင်၊ ကိုရင်လေးများထံသို့ သော်လည်းကောင်း၊ စာရေးတံမဲ၊ ဝါဆို၊ ကထိန်၊ ရှင်ပြု၊ ရဟန်းခံပွဲများသို့ သော်လည်းကောင်း တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ လုံးဝ(လုံးဝ) ၁၀၀% ပြန်မရောက်ရှိသည်ကို သတိကြီးစွာချပ်စေလိုပါသည်။
- မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ် လမ်းဆုံလမ်းခွ ကောင်းပေ့ ညွန့်ပေ့ နေရာကောင်းများတွင် ဆိုင်ကြီး၊ ဆိုင်သေး၊ လမ်းဘေးဆိုင်စသော မွတ်စလင်ကုလားပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့၊ အထိန်းအကွပ်မဲ့ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ရောင်းချလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊
- မြန်မာတိုင်းရင်းသားပိုင် တိုက်၊ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ၊ လယ်ယာများကို မွတ်စလင်ကုလားပိုင်အဖြစ်သို့ လွတ်လပ်စွာ၊ အတိုင်းအဆမဲ့ဝယ်ယူရန်အတွက်လည်းကောင်း၊
- ကားကောင်းကားသန့်ကြီးများကို မွတ်စလင်ကုလားပိုင်အဖြစ်သို့ ကန့်သတ်ချက်မဲ့ ဝယ်ယူစီးနင်းမောင်းနှင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊
- ဗုဒ္ဓဘာသာအပါအဝင်၊ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် မြန်မာတိုင်းရင်းသား အမျိုးသမီးများကို အထိန်းအကွပ်မဲ့၊ အတားအဆီးမဲ့၊ ကန့်သတ်ချက်မဲ့၊ ဥပဒေမဲ့၊ လွတ်လပ်စွာ ငွေနှင့်ပေါက်၊ လူဖောက်သာသနာပြုရန်အတွက် လည်းကောင်း၊
- အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်စလင်အင်အားများလာသော ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတော အစရှိသောဒေသများတွင် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများကို လည်လှီးသတ်ဖြတ်ရန် ဘဏ္ဍာငွေ အဖြစ်လည်းကောင်း အားလုံး(အားလုံး) ၁၀၀% ရောက်ရှိသွားသည်ကို သတိကြီးစွာချပ်စေလိုပါသည်။
ထိုသို့ အဆိပ်ပင် ရေလောင်းမိနေသော အဖြစ်မျိုးမဖြစ်ရလေအောင် ကိုယ့်အမျိုးဘာသာ သာသနာကိုထောက်ပံ့မယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားပိုင် ဒံပေါက်ဆိုင်များမှာသာ ဝယ်ယူစားသုံးကြစေလိုပါတယ်။
ဒံပေါက်မစားရတော့ဘူးလားဟုဆိုလျှင် စားနိုင်ပါတယ်၊ သို့သော် ကိုယ့်အမျိုးသားပိုင်ဆိုင်များမှာ စားသင့်လှပါတယ်။ ဒံပေါက်ဆို မစားရလျှင်မနေနိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာဒံပေါက်ဆိုင် အချို့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။
လောလောဆယ်ဆယ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာဒံပေါက်ဆိုင် ၃ဆိုင်ကို မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး ချော်တွင်းကုန်း မီးပွိုင့်အနီးက ကောင်းသန့်ဆိုတဲ့ မြန်မာဒံပေါက်ဆိုင်ကတော့ မအီတဲ့ ဒံပေါက်အဖြစ် ချက်ပြုတ်ရောင်းချနေပါတယ်။ ပါရမီလမ်းမကြီးပေါ်၊ ချော်တွင်းကုန်းမီးပွိုင့်နှင့် မီးရထားကုန်းကျော်ကြားတွင် တည်ရှိပါတယ်။ 786 မွတ်စလင်ကုလား ဒံပေါက်များလို၊ ဆိုးဆေးများအသုံးပြုထားခြင်းမရှိ၊ ဝါထိန်နေခြင်းမရှိပဲ ပကတိ ဒံပေါက်အရသာကို သုံးဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလှူ မင်္ဂလာပွဲများအတွက် ဒံပေါက်အပါအဝင် ထောပတ်ထမင်းကိုလည်း အော်ဒါလက်ခံပါသေးတယ်။ 786 မွတ်စလင်ကုလားဆိုင်များ နည်းတူ ၅ပွဲဝယ်ယူလျှင် ၁ပွဲလက်ဆောင်ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ ထို့အတူ အအေးမျိုးစုံကိုလည်း ဒံပေါက်စားရင်းသောက်သုံးနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒုတိယ အနေနဲ့ ဣစ္တိတံ လို့အမည်ရတဲ့ မြန်မာဒံပေါက်ဆိုင်ပါ။ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေးရှိ စာတိုက်မှတ်တိုင်အနီး၊ ရွှေဝါလမ်း မှာတည်ရှိပါတယ်။ ဆိုင်မှာတော့ လက်လီဝယ်ယူစားသောက်ခြင်းမပြုနိုင်ဘဲ အော်ဒါသီးသန့်ချက်ပြုတ်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ညီအကိုမောင်နှမတို့ရဲ့ အလှူ၊ မင်္ဂလာပွဲအမျိုးမျိုးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားချက်တဲ့ ဒံပေါက်အဖြစ်နဲ့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ၊ လိပ်ပြာသန့်စွာ တည်ခင်း၊ ဧည့်ခံကျွေးမွေးနိုင်ကြပါတယ်။
တတိယအနေနဲ့ကတော့ ချံပီယံလို့အမည်ရတဲ့ မြန်မာဒံပေါက်ဆိုင်ပါ။ လှည်းတန်းမီးရထားကုန်းကျော်အဆင်း ဆင်မလိုက်မီးပွိုင့်မရောက်မီ ညာဘက်ဘေးရှိ၊ ကွမ်းခြံ ၃ လမ်းအတွင်းမှာတည်ရှိပါတယ်။ ဤဆိုင်သည်လည်း သွားရောက်စားသုံးခြင်းမပြုနိုင်ပေမယ့် အော်ဒါကိုတော့ မွတ်စလင်ကုလားဒံပေါက်လက်ရာထက်သာအောင် ချက်ပြုတ်ပေးနေပါတယ်။ ညီအကိုမောင်နှမတို့ရဲ့ အလှူ၊ မင်္ဂလာပွဲအမျိုးမျိုးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားချက်တဲ့ ဒံပေါက်အဖြစ်နဲ့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ၊ လိပ်ပြာသန့်စွာ တည်ခင်း၊ ဧည့်ခံကျွေးမွေးနိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ဝိုင်းဝိုင်းချိုအမည်ဖြင့် ဗင်နီလာ၊ ချော့ကလက်၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ဘလူးဘယ်ရီ၊ ရောင်စုံဂျယ်လီ၊ ချောကလက်ချစ်ပ်၊ စပျစ်ခြောက်၊ ကွက်ကီး၊ အုန်း၊ သရက်၊ ပိန်းဥ၊ ပိန္ဒဲ၊ ဒူးရင်း၊ အုန်းစိမ်း၊ သီးစုံ၊ သံပရာ စသောအရသာစုံယိုးဒယားရေခဲမုန့်မျိုးစုံကိုလည်း လက်လီ၊ လက်ကား၊ အော်ဒါရောင်းချပေးနေပါတယ်။ ထိုရေခဲမုန့်များကို အလှူမင်္ဂလာပွဲများအတွက် ခွက်၊ ဇွန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို လိုက်လံတည်ခင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
မြန်မာတိုင်းရင်းသားပိုင် ဒံပေါက်ဆိုင်များကျန်ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။ အလျဉ်းသင့်သလို ကြော်ငြာ တင်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ညီအကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတိုင်းရင်းသားပိုင် ဒံပေါက်ဆိုင်များသိရှိ/တွေ့ရှိပါကလည်း ပေးပို့စေလိုပါတယ်။ ဒီPageမှာ နောက်ထပ် ဖော်ပြကြော်ငြာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိပ်စာများပါပုံလေးကို တတ်နိုင်သလောက်ရှယ်ခြင်း၊ Saveထားခြင်းဖြင့် နောက်နောင် မြန်မာဒံပေါက်စားချင်လျှင်၊ အော်ဒါမှချင်လျှင် လွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အနံ့အရသာကတော့ ကုလားဒံပေါက်များနှင့် ၉၀% အနီးစပ်ဆုံးတူညီပါတယ်၊ တကယ်လို့ မြန်မာဒံပေါက်တွေမှာ လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိရင် မိမိတို့ရဲ့ မျိုးချစ်စိတ် ၁၀%ကိုထည့်စားပေးမယ်ဆိုရင် ကုလားဒံပေါက်များနည်းတူ အရသာရှိစေမှာပါ။
(တပ်မတော်မှနိုင်ငံကိုကာကွယ်ရန် တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ အစိုးရမှ တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ရန် တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံကိုကာကွယ်ရန်၊ တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ရန် ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စသော တိုင်းရင်းသားများနှင့် ၁၃၅ မျိုးသောတိုင်းရင်းသားအားလုံးတွင် (နိုင်ငံသားတိုင်းတွင်) တာဝန်ရှိသည်။)
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 11:39 PM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
၁၈.၁၀.၂၀၁၂ ရက် နံနက် ၉း၀၀ နာရီတွင် AZG ရုံးဖွင့်ပွဲကို ကန့်ကွက်မည်
၁၇.၁၀.၂၀၁၂ ရက် နေ့လည် ၂း၀၀ နာရီပတ်ဝန်ကျင်တွင် စစ်တွေမြို့ရှိ မြို့မိ မြို့ဖများ၊ ရခိုင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းအသီသီများနှင့် ရခိုင် လူငယ်များမှ စုဝေးပြီး AZG/MSF အဖွဲ့နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲတခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင် ၁၈.၁၀.၂၀၁၂ ရက် မနက် ၉း၀၀ နာရီတွင် စစ်တွေမြို့ ၊ မိဇံရပ်ကွက် ၊ ကမ်းနားလမ်းတွင် ရှုခင်းသာအမည်ဖြင့် အခမဲ့ ဆေးခန်းတခုကို ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင့် မြို့ပေါ်ရှိ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြို့ပေါ်ရှိ ဂုဏ်သရေရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ရဟန်သံင်္ဃာတော်များကို ဖိတ်ကြားထားပါသည်။ ထိုဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ရန် ကိစ္စဖြင့် စစ်တွေမြို့ပေါ်ရှိ လူထုမှ သက်သေအထောက်အထားများကို စုစည်းခဲ့ကြပါပြီး မသင်္ကာဖွယ်ရာ အချက်အလက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟု အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့သော ခေါင်းဆောင် လူငယ်တယောက်မှ RSV ကို ပြောပြခဲ့ပါသည်။ “ဥပမာဗျာ - သူတို့က သဘောမရိုးဘူးဆိုတာကို အစကတည်းက ကြည့်ရင်သိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀ လောက်ကတည်းက ဘင်္ဂလီတွေအတွက်ပဲ သူတို့ လုပ်ပေး.
..လာတာပါ။ အခမဲ့ဆေးခန်းတွေဖွင့်တယ်။ ဘင်္ဂလီကုလားတွေကိုပဲ အဓိကဆေးကုသပေးခဲ့တယ်။ ဖွင့်တဲ့နေရာတွေကလည်း ဘင်္ဂလီတွေနေတဲ့ နေရာတွေမှာပဲ ဖွင့်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကတည်းက ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါ။ သူတို့ ဒီဘင်္ဂလီကို ရိုဟင်ဂျာဖြစ်အောင် အဓိက အထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့အဓိက သူတို့က အဓိက နေရာက ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ OIC ကိစ္စကို အပြင်အထန်ကန့်ကွက်နေချိန်တွင် AZG အဖွဲ့အစည်းသည် ကုလားတွေဆီမှ အထောက်အပံ့များကို အဓိက ယူထားသဖြင့် OIC နှင့် ပတ်သတ်မှုရှိလိမ်မည်လို့ မြို့လူထုမှ သံသယဖြစ်လျှက်ရှိပါသည်။ ဆက်လက်၍ “သူတို့ အခုလုပ်မယ် ဆေးခန်းကလည်း ပွင့်လင်းမှုမရှိဘူးဗျာ။ သူတို့ လုပ်မယ်ဆိုရင် ရခိုင်လူထုကို တခုခုတော့ ချပြသင့်ပါတယ်။ ဒါက ဘယ်လိုဘာကြောင်းလုပ်ရပါတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့၊ အခုက အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ငါတို့ ကြိုက်သလို လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါက်နေတယ်”လို့ ခေါင်းဆောင်လုပ်ငယ် ပြောပြသွားပါတယ်။ ယခုအခါ AZG အဖွဲ့မှ ရခိုင်ပြည်တွင် HIV/AIDS ဝေဒနာရှင် ၂၀၀ မှ ၃၀၀ လောက်ထိ ရှိတယ်ဆိုပြီး သတင်းလွင့်ထားကာ ထိုဝေဒရှင်များအား ဆေးကုသနိုင်ရန်အတွက် ဒီဆေးခန်းကို ဖွင့်လှစ်ရတာပါ သတင်းလွင့်ထားပါသည်။ သို့သော်လည်း ရခိုင်လူထုက ပြည်သူလူထုယုံကြည်သော ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်း (သို့) အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းတခုခုမှ တဆင့်လှူလျှင် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင်း ဆေးခန်းဖွင့်ခြင်းကိုမူ လက်မခံနိုင်ဟု သိရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၈.၁၀.၂၀၁၂ ရက် မနက် ၉း၀၀ နာရီတွင် မိဇံရပ်ကွက် ၊ လေညှင်းသာတွင် လူစုဝေးလျှက် AZG ကန့်ကွက်ပွဲကို ပြုလုပ်သွားမည်ဟု ၄င်းခေါင်းဆောင် လူငယ်မှ RSV ကို ပြောပြသွားပါသည်။ ထိုလူငယ်မှပဲ သူတို့သည် AZG နှင့် ပတ်သတ်ပြီး စာရွက် စာတမ်း အထောက်အထားများ စုဆောင်းရရှိထားပါသည်ဟုလည်း သိရှိရပါသည်။
မူရင်းသတင်း----Rakhine Straight View
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် အောက်တိုဘာလ(၁၆)ရက်နေ့က ဘင်္ဂလီ မူဆလင်ဘာသာဝင်များနေထိုင်သော အင်ဘာလာ ရပ်ကွက်တွင် အသုဘ တခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ထိုအသုဘကို သဲချောင်းရွာရှိ ဘင်္ဂလီ မူဆလ
င် ဘာသာဝင်များအသုံးပြုသော သင်္ချိင်းသို့ သွားရောက်မြုပ်နှံပြီး အပြန်တွင် သဲချောင်းရွာမှ ဘင်္ဂလီ မူဆလင်ဘာသာဝင်များက ထည့်ပေးလိုက်သော M 79 လောင်ချာ ၅ လက်နှင့် အခြားလက်နက်မျိုးစုံကို ဖမ်းဆီးရရှိကြောင့် Arakan Review မှ သတင်းရရှိသည်။
ဆက်လက်ပြီး “စိန်” မုန့်တိုက်ပိုင်ရှင်အား စစ်ဆေးမေးမြန်းရာတွင် ထိုလက်နက်များအား လုံထိမ်းတပ်ဖွဲ့မှ အရာရှိတဦးက ၀ယ်ယူပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် သဲချောင်းရွာမှ ကားပေါ်တွင် တင်ပေးလိုက်သော လက်နက်များမှာ သဲချောင်းရွာမှ ဘင်္ဂလီ မူဆလင်ဘာသာဝင်တို့ ပင်လယ်ပြင်သို့ ငါးဖမ်းထွက်စဉ်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်သည့် ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက် သမားများက လက်ဆက်ကမ်းပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်___________photo from samaa.tv...Egypt seizes weapons cache, arrests smugglers
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:08 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
Hacking Day(Top3Hacking Websites)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆယ်တန်းအောင်ခါစ ကျောင်းသားအများစု တစ်ထိုင်တည်း ပြောနေကျသည့်စကားမှာ
"ဟက်မယ်၊ ခိုးမယ်" စသဖြင့်ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်က ဘာမှမသိ၊ သူများ Gtal
k Password တွေသိလျှင် ကျေနပ်နေတတ်သူဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။
internet ဆိုင်များတွင် ရှေ့က ထိုင်သွားသူများက remember password လုပ်ခဲ့လျှင် အလွန်ပျော်...
သူတို့ account ထဲကိ
ုဝင်၊ ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို ခေါ်ကြွား၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဟက်ကာဟု ကြွားစိန်လုပ်ဖူးခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်...တကယ် လူသားတို့ အား အကျိုးပြုသော White Hacker တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်သူများအတွက် ဒီပို့စ်လေးကို တင်လိုက်ပါသည်။
ဒီပို့စ်လေးကတော့ တကယ်လည်းနာမည်ကျော်၊ တကယ်လည်း အသုံးများ၊ Mission တွေနဲ့ ဂိမ်းကစားသဖွယ် Hacking ကိုလေ့လာရသည့် website လေးများအား ညွှန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Top Website3ခုနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။
1 - Hack A Day (www.hackaday.com)
2 - Hack In The Box (www.hackinthebox.org)
3 - Hack This Site (www.hackthissite.org)
ဘာပဲပြောပြော...ဒီ ဆိုဒ်လေးတွေကနေ ပညာအများကြီးသင်ယူလို့ရပါတရ်...
ကိုယ့်လိုပဲ Begineer တွေ ရှိသလို၊ ဂုရုကြီးတွေ လည်း ရှိတဲ့အတွက်
Hacking နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အောက်လမ်းနည်းတွေမသိသွားရင်တောင်
Security ပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး နည်းနည်းပါး တီးမိခေါက်မိ ဖြစ်သွားမည်ဟု အာမခံပါသည်။
REF: Info Tech For Myanmar (IT4M)
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:07 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ အကြံအဖန်
Miss Myanmar International မနန်းခင်ဇေယျာရဲ့ မူရင်းဓာတ်ပုံကို အောက်တန်းကျတဲ့ နည်းနဲ့ ပြန်ပြင်ပြီးတော့ အွန်လိုင်းမှာ မျှဝေနေတဲ့ အတွက် အမှန်/အမှား ခွဲခြားသိအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
News of Myanmar FBမှ ပြန်လည်မျှဝေသည် .
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:00 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အောက်တိုဘာ ၁၅ လှုပ်ရှား မှု က ပြောသည့် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ အကြောင်း
by FNG on October 16, 2012
တင်ကျော်ကျော်စိုး ၊ ၊အစ္စလာမ်မစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကောင်စီ ရဲ့ရုံးတွေ မြန်မာ
နိုင်ငံ မှာ ဖွင့်လှစ် ဖို့လက်သင့်မခံ တဲ့ ဆန္ဒပြ မှု ကို တနင်္လာနေ့က မြန်မာ နိုင်ငံ တ၀ှမ်းမှာ
ကျင်းပနေ ချိန် မှာ ပဲ မြန်မာ အစိုးရသမ္မတ ရုံး အင်တာနက် စာမျက် နှာ မှ ပြည်သူ ၏ ဆန္ဒ
အရ OIC ရုံး ကို ဖွင့်လှစ် ရန် ခွင့် မပြု ဟု ကြေငြာ ခဲ့သည်။
၎င်း နေ့ညပိုင်း ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းမှာ ပင် OIC ရုံး ကို မြန်မာ နိုင်ငံ ဉ် ခွင့် ပြု မည် မဟုတ် ဟု
ထပ်မံ သတင်း ထုတ်လွှင့် ကာ ကြေငြာ ခဲ့ သည်။ ထို ဖြစ်စဉ် သည် လက်ရှိ အရပ်သား အရေခြုံ
မြန်မာ စစ်အစိုးရ ၏ မှားယွင်း မှု ပေါင်း များ စွာ ထဲ မှာ တစ်ခု သာ ဖြစ်သည်။
ဗဟန်းကြားတောရ လမ်းမှ ထောင်သောင်းချီ ရဟန်း ရှင် လူ ပြည်သူများ ဆူးလေစေတီ တော် သို့ 
ချီတက် ခဲ့ ခြင်း မရှိ လျှင် ၊ မန္တလေး တွင် လည်း သံဃာ များ ဆန္ဒ မပြ ခဲ့ လျှင် ၊ ပခုက္ကူ၊ ဖျာပုံ ၊
ရေစကြို နှင့် ရခိုင် ပြည်နယ် တ၀ှမ်း အပါ အ၀င် အနယ် အနယ် အရပ် ရပ် မှ ဆန္ဒပြ ကန့် ကွက် မှု
များ မလုပ် ဘူး ဆိုခဲ့ လျှင် မြန်မာ အစိုးရသည် OIC အစ္စလာမ် ၀ါဒီ တို့၏ ၀င်ရောက် အခြေစိုက်
ကို ကောင်းကောင်း ကြီး ကို အခြေချ ခွင့် ပေး မည် မှာ မြေ ကြီး လက် ခတ် မလွဲ ပင် ဖြစ်သည်။
တနင်္လာနေ့နေ့ လည် ပိုင်း နိုင်ငံ တ၀ှမ်း ဆန္ဒပြ မှု များ မစခင် နာရီပိုင်း အလို အထိ မြန်မာ အစိုးရ့
သည် OIC ရုံး ကို လူသာချင်း စာနာ ထောက် ထား မှု အရ NGO အသွင် ဖြင့် အချိန် အကန့်အသတ်
နှင့် ခွင့် ပြု မည် ဟု သာ ဆို ခဲ့သည်။ ယောင်လို့ပင် OIC ရုံး ဖွင့်လှစ် ခြင်း ကို လက်မခံ တော့ ဟု မပြော
ခဲ့ ချေ မှာ စစ်အာဏာရှင် စနစ် ၏ ပြည်သူ့ ဆန္ဒကို လွယ်လွယ် နှင့် မလိုက်လျှော ချင်သည့် အမွေ ဆိုး
OIC ရုံးကို မြန်မာ နိုင်ငံဉ် ဖွင့်လှစ် မှု ပေး ခြင်း မှာ မြန်မာ အစိုးရ ၏ အမြော်အမြင် နည်းမှု တစ်ခု သာ
ဖြစ် ပြီး ၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် လူအသေအပျောက် များ သည့် နာဂစ် ဖြစ်ပွား စဉ် အချိန် က ပင် အမေရိကန် ၏
ကူညီမှု လုပ်ငန်းများ ၀င်ရောက် ဆောင်ရွက် ရန် စီစဉ် မှု ကို လက်မခံ ခဲ့ သည့် မြန်မာ စစ် အစိုးရသည်
နိုင်ငံ တကာ မျက် နှာ စာ တွင် ၎င်း တို့ကို မင်းသားခေါင်း ဆောင်ထားသည့် ဘီလူး ဟု မြင်လို ပုံ မရ
ပြည်သူ့ ဆန္ဒ ကို လိုက်လျှောသည် ဟု ဆို သော အကြောင်း ပြ ချက် ဖြင့် OIC ရုံးဖွင့်လှစ် ခွင့် မပေး ဟု
ဆို မျှ ဖြင့် ပြည် သူ လူထု ၏ ထောက်ခံမှု ကို ပိုရလိမ့် မည် ဟု ထင်လျှင် အတော် ပင် မှား ချေ လိမ့်မည်။
အကြောင်း မူကား အရပ် စကား ဖြင့် ဆို လျှင် ဖင်မနိုင် ဘဲ ပဲကြီး ဟင်း သောက် ထား သော ကိစ္စ များ
ဖြစ် ၍ အရှက် နှင့် ပါးနပ် ကျွမ်းကျင် မှု မဲ့ ပုံ လူသိ အောင် ကြေငြာ မောင်းခတ် သလို ပင် ဖြစ်နေ သေး
စစ်ဖိနပ် အောက် တွင် ခါးသီး လှသည့် နေ့ရက်ပေါင်းများ စွာ ကို ကျော်ဖြတ် ခဲ့သည့် ပြည်သူ များ နှင့်
လူငယ် မျိုးဆက် သစ် များ က အရာ အားလုံး ကို တော်လှန် ရင် ဆိုင်ရန် အသင့် ဖြစ် နေကြသည်။
၎င်း တို့က ပြည်သူ့ ဆန္ဒမပါ ဘဲ ဆောင်ရွက် ထား သည့် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ၏ လုပ်ဆောင် ချက်များ ကို
ဆက် ပြီး စိမ်ခေါ် တော့ မည် ဖြစ်သည်။
တိုက် ပွဲ ကား မပြီး သေး… ရှေ့ တွင် ဆက်ရန် များ စွာ ရှိသေးသည်…..။
ဧရာဝတီ တိုင်း ဖျာ ပုံ မြို့တွင် ကျင်းပသည့် OIC ရုံး ဖွင့်လှစ် ခွင့် မပေး ရန် ကန့် ကွက် ဆန္ဒပြမှု
ဓာတ်ပုံ – မင်းခေါင် (ဖျာပုံ) /FNG
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:24 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အရက်သောက်ထားတဲ့ ရဲ နဲ့စစ်သားတွေက မလန်းဘုန်းကြီးကျောင်းကနေ ဥပုသ်စောင့် ပြန်လာတဲ့ အမျိုးသမီးအချို့ကိုလည်း စစ်ဆေးမေးမြန်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမျိုးသားတွေကို ခေါင်းပေါ်လက်တင်ခိုင်း၊ မြေပြင်ပေါ်မှောက်ခိုင်းပြီး ရိုက်နှက်ရာမှာ အနည်းဆုံး လူ ၁၀ ယောက်လောက် အရိုက်နှက်ခံရတယ်လို့ မျက်မြင်တွေ့သူ ဒေသခံ တစ်ဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီအချိန်ကလည်း အဲဒီ ငြိမ်းချမ်းသာယာ ရပ်ကွက်မှာပဲ ရဲနဲ့စစ်သား အယောက် ၃၀ နီးပါးက ဒေသခံပြည်သူ အယောက် ၆၀ လောက်ကို မြေပြင်ပေါ် မှောက်ခိုင်းပြီး အဲဒီအထဲက ၁၀ ယောက်လောက်ကို ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:15 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ပလောင်ဒေသအား ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ရန် စကခမှူး ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းပြင်ဆင်
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မန့်တုန့်မြို့ နယ်
တပ်ဖွဲ့အား ထပ်မံတိုက်ခိုက်ရန် စစ်
ဆင်ရေးကွပ်ကဲ မှုဌာနချုပ် (စကခ)မှူး တအာင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်
ကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်းကွပ်ကဲနေသည်ဟု စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
“တိုက်ပွဲ ငြိမ်နေတာတော့ ၄ ရက်တော့ရှိနေပြီ။ ဒါပေမဲ့ (ကျောက်မဲ အခြေစိုက်)
စကခ ၁ က ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ဇော်ဦး ကိုယ် တိုင် နမ့်ဆန်မှာရှိတဲ့ တပ် စခန်း
အစိုးရတပ် အင်အား လျော့သွားတာ လဲမရှိဘူး။ ပုံမှန်ပါပဲ” ဟု တအာင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ပြောခွင့်ရ မိုင်ဖုန်းကျော်
အစိုးရတပ်များသည် ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသဖြစ်သည့် နမ့်ဆန် နှင့်
မန့်တုံမြို့ နယ်အတွင်း တပ်ရင်း ၁၀ ရင်း ကျော်ရှိကြောင်း၊ မိုးဦးကတည်းကလည်း
နမ္မတူ၊ နမ့်ခမ်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်သို့ တပ်ရင်းအများအပြား ပို့ဆောင်ထား
“ဒီလ ၄ ရက်နေ့က ကျနော်တို့တပ်ချထားတဲ့ (ပန်စလွပ်တပ်စခန်း) တောင်ကုန်း
တခုကို အစိုးရတပ်က လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ဆက်တိုက်ပစ်လို့ ဆုတ်ပေးလိုက်
တာတော့ရှိတယ်၊ကျနော်တို့ ဆုတ်ရင်း ပစ်ရင်းနဲ့ အစိုးရဘက်က ဗိုလ်ကြီး
၁ ယောက် တပ်သား ၆ ယောက်ကျတယ်၊ ဒုတပ်ရင်းမှူး ၁ ယောက်လဲဒဏ်ရာ
အပြင်းအထန် ရသွားတယ်” ဟု TNLA ပြောခွင့်ရ မိုင်ဖုန်းကျော်က ပြောပြသည်။
မန်တုံမြို့နယ်အတွင်း၌ အစိုးရတပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲကြောင့် စစ်ဘေးသင့်ဒုက္ခသည် ၃၀ဝ ကျော် အတွက် ခရိယာန်ကုန်း နှင့် မန့်စပ်ရွာတို့၌
ဒုက္ခသည်စခန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးထားကြောင်း၊ ရွှေလီမြစ်ဝှမ်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ဒုက္ခသည်စခန်း၌လည်းသွားရောက်ခိုလုံကြောင်း တအာင်းအမျိုးသားပါတီ
TNP မှ မိုင်အုန်းခိုင်က ဆက်ပြောပါသည်။
“ပလောင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် Unicef က ဆန်ထောက်ပံ့ပေး
တာတွေတော့ရှိတယ်။ မလောက်ဘူး။ TNP ပါတီ ကနေ ဒေသခံတွေဆီက အလှူခံပြီး သူတို့ကိုထောက်ပံ့ကျွေးမွေးနေရတယ်၊ကလေးတွေလဲ စာမသင်ရတော့ဘူးဒီနှစ်။
ဒုက္ခသည် စခန်းထဲတော့ ကလေး နဲ့သက်ကြီးရွယ်အို အများဆုံးဘဲ။
လူလတ်ပိုင်း တွေကတော့ တရုတ်နိုင်ငံဘက် အလုပ်သွား လုပ်ကြနေရတယ်၊ ဝမ်းရေးလဲမလောက်တော့ဘူး” ဟု ၄င်းက ပြောသည်။အစိုးရဘက်ကထပ်ပြီးစစ်
ဆင်ရေးပြုလုပ်လာပါက TNLA ဘက်က လည်း ခုခံတိုက်ခိုက်ရန် စစ်ရေး
အသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ် သည်ဟု မိုင်ဖုန်းကျော်က ပြောပြ သည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:13 AM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
“ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက OIC အ ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူအများကြီးရှိတဲ့ နိုင်ငံလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကို OIC က ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ မှာ ဘာလာလုပ်မှာလဲ။ ယာယီပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမြဲတမ်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာရုံးမှ အခြေစိုက်စရာမလိုပါဘူး။ ကူညီပေး စရာရှိရင် ဒီမှာရှိနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အန်ဂျီအိုတွေကတစ်ဆင့် ကူညီပေါ့။ ရခိုင် လူမျိုးနဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေအကြား ပဋိပက္ခကနေ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားအောင် ဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်မှာ စိုးရိမ်ပါတယ်။ ဒါလုံးဝမလုပ်သင့်ဘူး။ လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံ ရေးပါတီတွေနဲ့ တပ်မတော်အနေ နဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာကို ထိပါးတယ်လို့ တွေးမြင်သင့်တယ်။ ကျွန် တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားပြီး ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မော တောင်ဖက်သွားဖို့ Tour ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ စကားပြောတော့ သူက ဒီတစ်နှစ် နှစ်နှစ်အတွင်း မှာ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ကို ဆော်ဒီ သူဌေးတွေကို ခဏခဏပို့ပေးရတယ် လို့ ပြောတယ်။ အဲဒီမှာ မွတ်ဆလင် သူပုန်တွေရှိတယ်လို့လည်း ကြားတယ်။ ဆော်ဒီဆိုတာ OIC ရှိတဲ့ နိုင်ငံ၊ ဆော်ဒီသူဌေးတွေဟာ အစွန်းရောက်တွေကို ထောက်ပံ့လေ့ရှိတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ ဒီအချက်ကို ပြန်စဉ်းစားဖို့သင့်တယ်။ သီပေါမင်းပါတော်မူကာနီးမှာ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တွေက ဘုရင့်ရှေ့မှာ ဖိနပ်စီးခွင့်အနိုင်ကျင့် ပြီး တောင်းသလိုမျိုး ခံစားရပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ကန့်ကွက်တာကို ထောက်ခံပါတယ်"။
Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 11:20 PM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ကလေးမြို့တွင် နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်လမ်းများမှတရား မဝင် ခိုးဝင် လာသော ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး(၁၆)ဦးအား အောက်တိုဘာလ (၁၄) ရက်နေ့တွင် ထပ်မံ ဖမ်းဆီး
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့တွင် နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်လမ်းများမှတရား မဝင် ခိုးဝင် လာသော ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး(၁၆)ဦးအား အောက်တိုဘာလ (၁၄) ရက်နေ့တွင် ထပ်မံ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ကြောင်း ကလေးမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ အတည်ပြု ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
၄င်းဘင်္ဂါလီများသည် ကလေး အနောက်မြောက် ဒေသ၊ မောက်လင်း အုပ်စုတွင်
နေ့လည်(၁၂း၁၅)နာရီ အချိန်တွင် ဖမ်းမိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ခိုးဝင်လာသော ဘင်္ဂါလီများကို ကလေးမြို့နယ် ညောင်တုန်း ရွာသားတစ်ဦးက တွေ့ရှိရာမှ ရဲစခန်းသို့ သတင်းပေးပို့ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကလေးမြို့ အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ယခု ဖမ်းဆီးမိသော ဘင်္ဂါလီ(၁၆)ဦးမှာ အမျိုးသားများဖြစ်ကာ
အသက်(၂၅)နှစ်အောက်လူငယ်များဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကလေးမြို့တွင် စက်တင်ဘာ(၁၃)ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သော ဘင်္ဂါလီအရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မတပြောကြားချက် ကို ထောက်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း တရားမဝင်
ခိုးဝင်လာသော ဘင်္ဂါလီများအား ဆက်တိုက်ဖမ်းမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 11:01 PM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ရမည်းသင်းမြို့ အရံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဝင် မွတ်ဆလင်များမှ ခရီးသွား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် နှစ်ဦးအား ဓါးများဖြင့် ထိုးခုတ်သတ်ဖြတ်
၁၃-၁၀-၂၀၁၂ ည ၁၀ နာရီခန့် တွင် ရမည်းသင်းမြို့ ဝါတိုးလယ်ရပ်နေ ဦးခင်မောင်အေး အသက်(၄၅)နှစ် နှင့် ဦးညိုစိမ့် အသက်(၃၄)နှစ်တို့ သည် အလုပ်ကိစ္စဖြင့် သိမ်ကုန်းကျေးရွာသို့ စည်ပင်သာယာလမ်း အတိုင်း ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားရာ လုံခြုံရေး တာဝန်ကျ အရံမီးသတ် တပ်ဖွဲ့ ဝင် မွတ်စလင်များမှ စစ်ဆေးရန် အကြောင်းပြတားဆီးခဲ့ ကြောင်းသိရပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ရမည်းသင်းမြို့ ပျဉ်တပ်ရပ်ကွက် နှင့် ဗမာ မွတ်စလင် ရပ်ကွက် ( ခ ) ( ဗ.မ.က )ရပ်ကွက် မှ မွတ်စလင်များ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွါးမှုကြောင့် အခြေအနေ တင်းမာ နေချိန်လည်း ဖြစ်ပွါး နေချိန် လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ အရံမီးသတ်မှ မွတ်စလင်များ တားဆီးထားတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို အမှောင်တွင်းပုံးနေကြသော အပေါင်းပါမွတ်စလင်များမှ ဝိုင်းဝန်းထွက်ရိုက်ကြပြီး ဓါးများဖြင့် ထိုးခုတ်သတ်ကြသဖြင့် ဦးခင်မောင်အေး နှင့် ဦးညိုစိမ့် တို့ က အော်ဟစ်အကူညီ တောင်းရာ ပတ်ဝန်ကျင်ရှိ ဗမာများ မှ အချိန်မှီသွားရောက် ကူညီခဲ့သဖြင့် အသက်ဘေးမှ လွတ်ခဲ့ပေမယ့် ရမည်းသင်း ဆေးရုံတွင် အရေးပေါ်လူနာများအဖြစ် ကုသလျှက်ရှိကြောင်း မျက်မြင်သက်သေတဦးက Myanmar News Now ကိုပြောပါတယ်။
မွတ်စလင်များ ဓါးဖြင့်ထိုးခုတ်ခံထားရသည့် လူနာများ၏ ဓါတ်ပုံများကြည့်ရှုလိုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
မှတ်ချက်။ ။ နှလုံးရောဂါ အခံရှိသူများ မကြည့်သင့်ပါ
ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ ၁၂နာရီမှာ မွတ်စလင်များ လက်ချက်ကြောင့် ဆေးရုံ တင်ထားရသော လူနာဦးညိုစိမ့်နှင့် ဦးခင်မောင်အေးတို့ အား ခရိုင်ရဲမှုးနှင့် အရာရှိ များက ဆေးရုံသို့ လာရောက် အားပေးပြီး လိုအပ်သည်များကို ကူညီပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အခင်းဖြစ်ရာတွင် ပါဝင်ကြသူများကို ဖမ်းစီးထားပြီး ထိရောက်စွာ ဆက်လက်အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ပြောကြားသွားပါတယ်။
ထိုလူနာများအားမြို့နယ် တာဝန်ရှိသူများမှ တစ်ဦးလျှင် ငါးသောင်းကျပ်စီ လာရောက်ကူညီ သွားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။
ရမည်းသင်း မြို့ နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ အသိုင်းဝိုင်းမှ ပြောပြချက်အရ ဒီညမှာ အရင်ညများထက် လုံခြုံရေး အင်အားနှစ်ဆ တိုးပြီးချထားမည်ဟု သိရပါတယ်။
Rakhine Straight Views ၏သတင်းစာသားကိုကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်
ပါသည်။ သတင်းဓါတ်ပုံ မှာ သစ်ထူးလွင်မှဖြစ်ပါသည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 10:48 PM Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook